08/22/13 ~ Myanmar News Updates
မြန်မာ့ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်
10:30:00 PM Myanmar News Updates 1 comment
တောကြိုအုံကြားမှ လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေရသဖြင့် ပေတိပေစုတ် ထွက်လာသော သီဟတင်စိုးတစ်ယောက် တော်လှန်ရေး အတွက် အသုံးပြုရန် မြို့ပေါ်တက်၍ ယမ်းစိမ်း၊ ယမ်းခြောက်၊ ယမ်းစို၊ နှင့် သီတင်းကျွတ်ဖောက်သည့် ဗျောက်အိုးများကို လာဝယ်လေရာ မြို့ပေါ်တွင် မျက်စိ သူငယ်နားသူငယ် ဖြစ်နေရှာလေ၏။
ထိုစဉ် ပေတိပေကြောင်နှင့် ကားလမ်းဖြတ်ကူးရာ ကားတစ်စီးနှင့် တိုက်မိမလို ဖြစ်သွားလေ၏။ ကားမှာ ကျွီ ခနဲ ရပ်သွားပြီး ကားပေါ်မှ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ Top ten စာရင်းဝင် က...ုမ္ပဏီ ကြီးတစ်ခုတွင် အမြဲတမ်း MD ဖြစ်နေသော ဟိန်းဝေယံ ဆင်းချလာလေသည်။ ဆင်းဆင်းလာချင်း နေကာမျက်မှန်ကို ချွတ်ကာ အလိုမကျသလို ပုံစံဖြင့် ကားပတ်လည်ကို သေသေချာချာ ကြည့်၏။ ကားနောက်ခန်းမှ သူ၏ အမြဲတမ်း သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြကုန်သော ဇော်ဇော်အောင်နှင့် ဇင်မျိုး တို့မှာ ပြာပြာသလဲ ဖြစ်ကာ ဆင်းလာကြပြန်လေလျှင် တောသားကြီး သီဟတင်စိုး မှာ နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်နေလေသည်။ ဟိန်းဝေယံ မှ တောက်တစ်ချက်ခေါက်ကာ နေကာမျက်မှန် ပြန်တပ်ပြီး ကားပေါ် ပြန်တက်သွားသည်။
ထိုအချိန်တွင် ကားလမ်းဟိုဘက်တွင် အကြော်ရောင်းနေသော အမြဲတမ်းမုဆိုးမ မို့မို့မြင့်အောင်မှာ ထိုအဖြစ်အပျက် အကုန်လုံးအား တွေ့မြင်လိုက်ရလေသည်။ သူမသည် ရပ်ကွက်ထဲ အမြန်ပြန်ကာ ထိုအကြောင်းအား ဒေါ်ထားအဖွဲ့ အက်စတာ အဖွဲ့တို့အား အတင်းတုတ်လေသည်။ ဒေါ်ထားနှင့် အဖွဲ့မှာ နားမထောင်အား။ သူတို့အနေဖြင့် မင်္ဂလာဆောင် တစ်ခုအားသွားစရာရှိသေးသည်။ ထိုပွဲအား သူမတို့ အဖွဲ့လိုက် သွားထိုင်နေမှ ဖြစ်မည်။ ထိုမင်္ဂလာပွဲမှာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ခမ်းခမ်းနားနား ဆောင်သောပွဲ ဟုဆိုသော်လည်း ဂိုဒေါင်ခန်းမ တစ်ခုထဲတွင်သာ ဖြစ်၏။
မင်္ဂလာပွဲသို့ ရောက်သွားသော် သတို့သား ဖခင် ဦးအောင်လွင်မှ ကြိုဆိုပြီး အမြဲတမ်းရှေ့နေဖြစ်သော ကြည်စိုး( IC) နှင့် မိတ်ဆက်ပေးလေသည်။ သတို့သားမှာ အမြဲတမ်းလူပျိုကြီး ကျော်ရဲအောင် ဖြစ်ပြီး သတို့သမီးမှာ အမြဲတမ်း အပျိုကြီး စိုးမြတ်သူဇာတို့ ဖြစ်သည်။ သတို့သားနှင့် သတို့သမီးမှာ ၀အောင်စားနော် အားမနာနဲ့ ဟုြေ့ပာနေသော်ငြား စားပွဲပေါ်တွင်မူ အချိုရည်ပုလင်း တစ်ပုလင်းစီသာ ရှိလေသည်။
ထိုအချိန် တက္ကသိုလ်သွားတက်သည် ဆိုသော်လည်း MICT မှ ကျောင်းတက်ပြီး ပြန်လာသော ၀တ်မှုန်ရွှေရည်နှင့် သူမ၏ အမြဲတမ်း သူငယ်ချင်း အိဖြိုးချယ်ရီ နှင့် ယွန်းရွှေရည် တို့သည်မင်္ဂလာဆောင် သို့ လာလေလျှင် လမ်းတွင် အမူးသမားသုံးဦးမှ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လိုက်နှောင့် ယှက်လေ ၏။ နှောင့်ယှက်မှာပေါ့ သူမတို့ လာတာက ဘယ်အိမ်ယာထဲက လျှောက်လမ်းကြီးမှ မသိတာ။ အမူးသမားများမှာလည်း အိမ်ယာ လမ်းထဲ ဘယ်လိုရောက်နေသည် မသိ။
သူမတို့ ဘ၀ပျက်တော့မည့်ဆဲဆဲ ဘယ်နားမှ ရောက်လာမှန်း မသိသော နေတိုးမှ သုံးယောက် တစ်ယောက် ဖိုက်တင်ချလေလျှင် ထိုသုံးဦးမှာ လိုသည်ထက်ပို၍ မြေကြီးပေါ် ဂျွမ်းထိုးပြကာ မှုန်နေအောင် ထွက်ပြေးကြလေတော့သည်။ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး ပြန်ထွက်သွားလေလျှင် သူမ၏ Visiting card မှာ အလိုက်သတိပင် ကျကျန်ခဲ့လေ၏။ ထိုကတ်အားနေတိုးမှ ကောက်ယူကာ သူ၏ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သော Kညီ အားပြသကာ နှစ်ယောက်သား ရယ်မောလိုက်ကြသည်။
အမှန်တကယ်က ၀တ်မှုန်ရွှေရည်မှာ သူလက်စားချေရန် လိုက်လံရှာဖွေနေသော အောင်ခိုင်၏ သမီး ဖြစ်ပြီး အတင်းပင်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လာတွေ့ကြခြင်းပင်။ သူတို့နှစ်ဦး ထိုမှ အပြန် လမ်းပေါ်တွင် ရှောက်သီးေ ဆးပြား ရောင်းနေသော သူထူးစံနှင့် ဒိန်းဒေါင် တို့အားတွေ့လေလျှင် မျက်စ ပစ်ပြလိုက်လေရာ ဒိန်းဒေါင်မှာ အသည်းဘ၀င်ခိုက်ကာ ဟိုဘက်လမ်းမှ လျှောက်လာသည့်ယခုမှ နယ်က တက်လာသော တောသူဌေး နေမျိုးအောင်အား သွားတိုက်မိလေသည်။ နေမျိုးအောင်မှာ ပြာပြာသလဲ ထွက်ပြေးလေရာ ကြော်ငြာရိုက်ကွင်း တစ်ခုအား ဖြတ်ပြေးမိလေသည်။ ဒါရိုက်တာမှာ အမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ကာ နေမျိုးအောင်အား ကြိမ်းမောင်းလေလျှင် နေမျိုးအောင်မှ
“ သိဘူးလေဗျာ သီချင်းတွေပဲ လှိမ့်ဆိုနေကြတော့ ကြော်ငြာရိုက်နေတာလို့ ဘယ်ထင်မလဲဗျနေပါအုံး ခင်ဗျားတို့ကြော်ငြာ က သီချင်းဆိုတဲ့ပုံရိုက်ရင် ပြီးပြီလား”
ဟု ဘွင်းဘွင်းကြီး ပြောချလိုက်လေရာ ဒါရိုက်တာမှာ နေမျိုးအောင်အား အနောက်မှ လိုက်ကာ ဆောင့် ကန်လေတော့ သည်။ ထိုအချိန်တွင် ခုနက တောမှ တက်လာသော သီဟတင်စိုးသည် ထိုနေရာသို့ မယောင်မလည်ရောက်လာပြီး ကြော်ငြာမင်းသမီးအား ကြည့်ကာ သားရေယိုနေစဉ် လမ်းမပေါ်ရှိ ဘေလ်ဘုတ်ပေါ်မှ နေရဲမာန်မှ
“ ကောင်လေး မတူရင် မတုနဲ့”
ဟုဆိုကာ တဟားဟားရယ်လေသည်။ ထိုအချိန်တွင် မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်ကြီးမှာ မျက်မှောင်ကျုံ့၍ စိတ်ရှုပ်နေဟန်ရှိသည်။ ခနအကြာ ..သူရှိရာသို့ လက်ထောက် ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်ဟန်တူသူ တစ်ဦးရောက်လာသည်။ ထိုအခါခေါင်းဆောင်ကြီးက အားရ၀မ်းသာဖြင့် ထလိုက်ပြီး'' ဘယ်လိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး..မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယမ်းဝယ်လို့ ရခဲ့ရဲ့လား'' ဟုမေးလိုက်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမှ '' ယမ်းဝယ်လို့မရခဲ့ပါ။ သီဟတင်စိုးတို့ အဖွဲ့ က တော်လှန်ရေးအတွက်ဆိုပြီး အကုန်ဝယ်သွားလို့ ပါ'' ဟုပြောလိုက်ရာ..ခေါင်းဆောင်ကြီးခဗျာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် ငိုင်ကျသွားလေတော့သည်။
ကျန်းမာဖို့နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ထဲမှာ -ရေချိုးနည်းမှန်ဖို့လည်းပါ ပါတယ်။
ဖုန်း Sim Card Lock ကျသွားရင်ဖြေရှင်းနည်း
10:22:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
သိပြီးသားလူတွေလည်း ရှိသလို မသိသေးသူတွေ ထပ်သိရအောင်လို့
အဓိကအချက်ကတော့ ဖုန်းဝယ်ပြီးလို့ Sim Card ကိုချိုးလိုက်ပြီးရင် ဘေးက Cover card လေးကို လွှင့်မပစ်လိုက်ဖို့ပါဘဲနော်
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့် Sim Card က lock ကျသွားပြီဆိုရင် ဖုန်းလိုင်းပျောက်ပြီး unlock ပြန်လုပ်ဖို့ ဖုန်းက PUK Code တောင်းပါလိမ့်မယ်
PUK ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတာနဲ့တင် MPT ရုံးဆီရောက်ရောက်သွားရတယ် တကယ်တော့ ဖုန်းဝယ်ကတည်းက PUK code ကပါပြီးသားပါ (ပုံမှာပြထားသလို)unlock ပြန်လုပ်ပုံကတော့ အဲ့ဒီ code ၈ လုံးကို ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် ok နှိပ်ပါ။
PIN number အသစ်ပြန်လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ 12345 လို့သာ ရိုက်ပြီး ok နှိပ်ပါ နောက်တစ်ခေါက် PIN number ကို confirm လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ 12345 လို့ထပ်ရိုက်ပေးပြီး ok နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုပြီးပါပြီ Sim Lock, ပြုတ်ပြီး ဖုန်းလိုင်းပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်
ပျောက်ဆုံးသွားသော လက်ထပ်လက်စွပ်ကို ၁၆ နှစ်ကြာပြီးမှ မုန်လာဥနီအတွင်း ပြန်လည်တွေ့ရ
ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် သူ၏ လက်ထပ်လက်စွပ်ကို မီးဖိုခန်းအတွင်း ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး ၁၆ နှစ်ကြာမှ သူ၏ဥယျာဉ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသော မုန်လာဥနီ၌ စွပ်လျက်သား ပြန်လည်တွေ့ရှိရကြောင်း Metro သတင်းဌာနက ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဖော်ပြသည်။ လီနာပါဆန် အမည်ရှိ အမျိုးသမီးသည် ရွှေဖြူဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး စိန်ပွင့်ခုနစ်ပွင့် ပါဝင်သော လက်ထပ်လက်စွပ်ကို ၁၉၉၅ခုနှစ်က ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။သူသည် ဥယျာဉ်အတွင်း မုန်လာဥများကို နုတ်ယူစဉ် လက်စွပ်ကို ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ၏ မှားတာရှိရင်တောင်းပန်သည်ဆိုတာကို အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် လက်မခံ
10:17:00 PM Myanmar News Updates No comments
အမျိုးသားလွှတ်တော်၌ ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌက ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားစဉ် "မှားတာရှိရင် တောင်းပန်ပါတယ်" စကားရပ် သုံးနှုန်းမှုကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မပြုဘဲ ကောက်နုတ်ပယ်ဖျက်ကြောင်း သြဂုတ် ၂၁ ရက်က အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်က သတိပေး ပြောကြားသည်။
တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေး ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့သည့် အချက်များအား အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီမှ ထပ်မံလေ့လာတွေ့ရှိ ပြင်ဆင်သင့်သည့် အချက်များ ပြင်ဆင်၍ အမျိုးသားလွှတ်တော်၌ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မြင့်ဖေက အစီရင်ခံစာအား ဖတ်ကြားစဉ် "အမှားယွင်း ပါခဲ့လို့ရှိရင် အပြောအဆိုမှား အမှားများ ဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ကို နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ အတွက်လည်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် တောင်းပန်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ" ဟု ပြောဆိုခဲ့မှုကို သတိပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ သုံးနှုန်းပြောဆိုမှုအား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်က ပြောကြားရာတွင် ဦးဇော်မြင့်ဖေ ပြောကြားသွားသော "ကျွန်တော်တို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါဆိုသည့်" စကားသည် လိုအပ်ချက် မရှိကြောင်း၊ ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ တာဝန်သည် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဖြစ်စေ တင်သွင်းသည့် ဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်ကိုယ်စား သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီး၊ ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူများထဲမှ လာရောက်ဆွေးနွေးလိုသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ကြားနာညှိနှိုင်း၍ လွှတ်တော်ကို ပြန်လည်တင်ပြသည့် ကော်မတီသာဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီ၏ တင်ပြမှုအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဆုံးဖြတ်မှသာ အတည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
"လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဆုံးဖြတ်တဲ့ အခါကြတော့လည်း ယနေ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ် ရလို့ရှိရင် သတင်းစာထဲ ထည့်ခိုင်းတယ်။ အရင်တုန်းက ပြန်တမ်းမှာပဲ ထည့်တယ်။ သတင်းစာထဲမှာ ထည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဘာသာရပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းများ၊ စိတ်ဝင်စားသူများက ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်အောင် ပြည်သူ့အသံ လွှတ်တော်အသံက ဒါပဲ။ ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ လာရောက်ဆွေးနွေးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသား လွှတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးက တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုထားတာ ဖြစ်တယ်။ တယ်လီဖုန်းနဲ့ လှမ်းပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်စားလှယ်ကို ပြောလို့ရတယ်။ ဘယ်ဥပဒေကြမ်းရဲ့ အပိုဒ်ကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တယ်။ ဆီလျော်သည်ဖြစ်စေ၊ မဆီလျော်သည်ဖြစ်စေ၊ ပြောတဲ့အခါ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ဒါကိုနားထောင်ရမယ်။ လက်ခံရမယ်။ တင်ပြခဲ့လို့ရှိရင် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီနဲ့ ကြိုတင်ညှိသင့်တာ ညှိရမယ်။ ကြိုတင်မညှိနိုင်ရင်လည်း ဒီနေ့ ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီရဲ့တင်ပြချက်က တီဗွီအစီအစဉ်ကနေ ပါမယ်။ အစီအစဉ်မှာပါလို့ ပြည်သူကနေ နားထောင်ပြီးလို့ ဘာကိုဘယ်လို လုပ်လိုက်ပါလားလို့ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကို လှမ်းပြောလို့ ရှိရင်လည်း ဆွေးနွေးတဲ့နေ့မှာ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အားလုံးက အကောင်းဆုံးကို ၀ိုင်းဆုံးဖြတ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့၊ ဆုံးဖြတ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ အမှန်ဆုံးပဲ ဖြစ်တယ်။ မှားယွင်းတယ်ဆိုတာ ဘာမှားယွင်းတာလဲ။ မှားယွင်းတယ်ဆိုတာက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီရင် မှားယွင်းတယ်။ တခြားသော တည်ဆဲဥပဒေများနဲ့ မကိုက်ညီဘဲ ရှေ့နောက်ဆီလျော်မှု မရှိရင် မှားယွင်းတယ်။ ဒါပဲ ရှိပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
7:43:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းသားများ အတူတကွ မိတ်ဆုံစားပွဲ တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အသင်းနှင့် ဆက်ဆံရေး မပြေမလည် ဖြစ်နေသည်ဟု သတင်းကြီးနေသည့် ဝိန်းရွန်နီက ဇနီးဖြစ်သူနှင့်အတူ စုံတွဲ တက်ရောက် ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ချယ်လ်ဆီး အသင်းက စိတ်ဝင်စားနေသော ရွန်နီသည် ရာသီကြို လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်များတွင် အသင်းနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ခြင်း မရှိသော်လည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲဦးထွက်အဖြစ် ဆွမ်ဆီးစီးတီးကို (၄-၁)ဖြင့် အနိုင်ယူခဲ့စဉ်က လူစားဝင် ကစားသွားခဲ့သည်။ အင်္ဂါနေ့ညက မန်နေဂျာ ဒေးဗစ်မိုယက်စ်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့သော အသင်းသားများ မိတ်ဆုံညစာ စားပွဲတွင်မူ ရွန်နီသည် ဇနီးသည်ကောလင်းရွန်နီနှင့်အတူ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ မန်ချက်စတာ မြို့တော်ခန်းမရှိ ဒင်းစ်ဂိတ်သို့ ရွန်နီနှင့် မိုယက်စ်တို့အပြင် အသင်းမှ နာမည်ကျော် ကစားသမား အများအပြားလည်း ချစ်သူများ၊ ဇနီးများနှင့်အတူ စုရုံးလာခဲ့သည်။
တွမ်ကလီဗာလေက ၎င်း၏ချစ်သူ ဂျော်ဂျီယာနာ ဒေါဆတ်ကို ခေါ်ဆောင်လာ သလို ရော်ဘင်ဗန်ပါစီက ဇနီးသည် ဘူချရာ ဗန်ပါစီ၊ ရိုင်ယန်ဂစ်ကလည်း ဇနီးသည် စတေစီဂစ်တို့ကို အသီးသီး ပွဲထုတ်လာသည်။ နီမန်ယာ ဗီဒစ်သည် ဇနီးဖြစ်သူ အေနာ အိုင်ဗန်နိုဗစ်နှင့်အတူ ရောက်ရှိလာပြီး ဂျွန်နီအီဗန်စ်က လက်ထပ်ထားသည်မှာ လပိုင်းမျှသာ ရှိသေးသည့် ဟယ်လန် မက်ကောနဲလ်နှင့်အတူ ပွဲတက်ခဲ့သည်။ ခရစ်စမောလင်း၊ အက်ရ်ှလေယန်းနှင့် ဖီးလ်ဂျုံးစ်တို့ကလည်း ၎င်းတို့၏ လက်တွဲဖော်များနှင့်အတူ ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဒေးဗစ်ဒီဂီယာ၊ ရှင်ဂျီကာဂါဝါ၊ အန်တိုနီယို ဗလန်စီယာ၊ ရီယိုဖာဒီနန်၊ ဒန်နီဝဲလ်ဘက်၊ ဝီလ်ဖရိုက်ဒ်ဇာဟာ၊ အလက်ဇန္ဒား ဘတ္တနာတို့မှာမူ အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းကင်းနှင့်ပင် မိတ်ဆုံစားပွဲသို့ ရောက်ရှိလာသည်။
မိုယက်စ်သည် ယူနိုက်တက်၏ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲဦးထွက် ကိုင်တွယ်ဖြတ်သန်းမှုတွင် (၄-၁)ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သည့်နောက် ကျေနပ် စရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရွန်နီသည် အဆိုပါ ပွဲစဉ်တွင် မိနစ်ပိုင်းသာ ကစား ဖူးပြီး သွင်းဂိုး(၂)ဂိုးကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အသင်းသားများ ဂိုးသွင်းပြီး အောင်ပွဲခံချိန်တွင် အတန်ငယ် ကင်းကွာနေဟန် ရှိသော်လည်း ဗန်ပါစီက ရွန်နီထံ သွားရောက် အောင်ပွဲခံ ဝေမျှ ခဲ့သည်ကို လည်း တွေ့ရသည်။ ယခုကဲ့သို့ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ အသင်းသားများ စုံစုံညီညီ ရောက်ရှိ လာချိန်တွင် ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ပရိသတ် အချို့က ဖာဒီနန်နှင့် အချို့သော ကစားသမားများကို ခွင့်တောင်း ကာ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ယူခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
7:42:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
နာမည်ကျော် အွန်လိုင်းစတိုး Japan Trend Shop မှရောင်းချသည့် ဂျပန်ဘာသာ ဖြင့် ဟီမာဇာကူရာ ဟုခေါ်သော ခေါင်းအုံးမှာ ဂျပန်မလေးတစ်ဦး ဒူးကွေးထိုင်နေသည့်ပုံစံ ဖန်တီးထားပြီး ခေါင်းချလဲလျောင်း လိုက်သည့်အခါ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်သော နူးညံ့သည့်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ တကယ့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ၏ပေါင်ပေါ်တွင် အိပ်စက်အနားယူနေရသလို သက်သောင့်သက်သာ ရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ပလတ် စတစ်ဖော့တစ်မျိုးနှင့်ပြုပ်လုပ်ထားပြီး အဖုံးပါရှိသော အဆိုပါ ခေါင်းအုံးပေါ်တွင် အိပ်စက် လဲလျောင်းခြင်းဖြင့် မိခင် သို့မဟုတ် ချစ်ဇနီး၏ ပေါင်ပေါ်တွင် အနားယူနေရသလို စိတ်ခံစားမှု များ ပေး စွမ်းနိုင် မည်ဖြစ်သည်။
၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ် နှစ်လယ်က Trane Corporation မှ အိမ်လွမ်းနာကျနေသူများနှင့် တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာယ သမား အထီးကျန်ဆန်သူများအတွက် အဓိကထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ရာမှ ယနေ့ထိ လူကြိုက်များ ရောင်း အားကောင်းနေ ဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ခေါင်းအုံးကို Japan Trend နှင့် Amazon Japan တို့မှရောင်း ချပေးနေသလို တိုကျိုနှင့် နာရီတာ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ရှိ အကောက်ခွန်လွတ်ဈေးဆိုင်များတွင် လည်း ရောင်းချလျက်ရှိပြီး အများစုက အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးရန် ဝယ်ယူကြသည်ဟု သိရသည်။
Credit : Anoe Soe
7:40:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
နိုင်ပန်းညွန့် ဦးဆောင်သော ဟံသာဝတီ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးပါတီ (H.R.P) တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ် ခရိုင်၊ ပကျွတ် ကျေးရွာနယ်မြေအတွင်း အခြေပြုလှုပ် ရှားနေခြင်း ဖြစ်သည်။
အလင်းဝင်သော အဆိုပါ အဖွဲ့တွင် ဗိုလ်မှူး အဆင့်ရှိနိုင်အောင်ကျနိုက်၊ ဗိုလ်ကြီးနိုင်ထူးထူးစိန်၊ ဗိုလ်ကြီးနိုင်ကလပ်စွန်း၊ အရာခံ ဗိုလ်နိုင်အထူး၊ တပ် သားနိုင်ချမ်း ကရော့၊ တပ်သားနိုင် အောင်ကျနိုက်၊ တပ်သားနိုင်အဝနှင့် တပ်သားနိုင်ဗလိုင်စိုး တို့ဖြစ်သည်။
၄င်းတို့နှင့်အတူ လမ်းလျှောက် စကားပြော စက်တစ်လုံး၊ လက်ပစ်ဗုံး တစ်လုံး၊ AK 47 နှစ်လက်၊ ပွိုင့် 22 နှစ်လက်၊ ပွိုင့် ၃ဝ ကာဘိုင် တစ်လက်၊
ခြောက်လုံးပြူး နှစ် လက်၊ လုပ်သေနတ်တို တစ်လက်နှင့်ကျည် ၇၁ တောင့် တို့ကိုပါ အပ်နှံပြီး အလင်းဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြန်ခါနီးတွင် ငိုယိုပြီး ပြောဆိုသွားသော ကင်တားနား၏ပြောကြားချက်အား သမ္မတပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်မှ ပြန်လည်ဖြေရှင်း
ဆန္ဒပြမှုများကို အစိုးရဘက်မှ အကာအကွယ်မပေးခဲ့ ကြောင်းကင်တားနား၏
ပြောကြားချက်မှာအဖြစ်မှန်နှင့်ကွဲလွဲနေကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်မှ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မစ္စတာ ကင်တားနားက “မိတ္တီလာမြို့ က ဖြစ်ရပ်ဟာ ကျနော့် အတွက် အနီးအနားမှာရဲတွေ ရှိပေမယ့် အကာအကွယ်မဲ့နေပီလုို့ ခံစားရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တွေးမိတာက ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လတုန်းက ဖြစ်ခဲ့ တဲ့မိတ္ထီလာပဋိပက္ခမှာ လူ၄၃ဦးအသတ်ခံနေရတုန်းက ရဲတွေဟာဒီလိုပဲကာကွယ်မှု မပေးဘဲ ရပ်ကြည့်နေမယ် ဆိုတာကုိုတွေးမိပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီပြောကြားချက်အပေါ်ဦးရဲထွဋ်က “မစ္စတာ ကင်တားနားရဲ့ပြောကြားချက်ဟာတကယ်ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်မှန် နဲ့ကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်။တကယ်တော့အဲဒီနေ့က ကင်တားနားရဲ့ ယာဉ်တန်းနဲ့အတူ ရဲတပ်ဖွဲ့က ကားတစီး၊ လုံးခြုံရေး ယာဉ်တစီးလည်း အတူတူလိုက်ပါလာတယ်။ နောက် မစ္စတာ ကင်တားနားကို ဆန္ဒပြမယ် ဆိုတဲ့ လူတွေ ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီလူတွေကို ထိန်းဖို့အတွက် ရဲအင်အား ၃၀ ကျော်ကိုလည်း အဲဒီ လူတွေ စောင့်ဆိုင်းတဲ့နေရာမှာ ကျေန်ာတို့ ချထားခဲ့တယ်။ ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်း ချထားခဲ့တယ်။
“ည ၁၀ နာရီရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ကာဖျူး အချိန်ရောက်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အဲဒီလူအုပ်စုတွေကို လူစုခွဲဖို့ ရဲက ပြောတယ်။အဲဒီအချိ်န်မှာလူကကျနော်တို့သတင်းအရ၃၀၀၊ ၄၀၀ လောက်ရှိတယ်။ အဲဒီလို လူစုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခွဲနေတဲ့အချိန်မှာ မစ္စတာကင်တားနားရဲ့ ကားယာဉ်တန်းက အဲဒီနေရာကို ည ၁၀နာရီ ခွဲလောက်မှာရောက်လာတယ်။ ရောက်လာတဲ့အချိန် အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူ၁၀၀လောက် ဆက်ပြီးတော့ ကျန်နေသးတယ်။ အဲဒီလူတွေက မစ္စတာ ကင်တားနားကို ဆိုင်းဘုတ် ၁၆ ခုလောက် ထောင်ပြီးတော့မှ မစ္စတာ ကင်တားနားကို အလိုမရှိကြောင်း အော်တာတော့ရှိတယ်။နောက်တချို့လူအနည်းငယ်တော့ သူကား တခါးမှန်ကို သွားခေါက်ပြီးတော့ စာတစ်စောင်နဲ့ ကင်တားနားပုံ ရိုက်ထားတဲ့ တီရှပ်တစ်ထည်ပေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ တယ်။ကင်တားနား ကားတံခါးကို ဖွင့်မပေးတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ အဲဒီစာပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတွကို ရဲကဖယ်ရှားပြီးတော့မှ ယာဉ်တန်းဆက်သွားနိုင်အောင် လမ်းရှင်းပေးခဲ့တယ်။
“နံပါတ် ၁ ရဲလုံခြုံရေးအစောင့်ရှောက် မရှိဘူးဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ ရဲက အတူတူပါတဲ့အပြင် သွားနိုင်ဖို့ အတွက် လမ်းရှင်းပေးခဲ့တယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ လူတွေက သူကို အန္တရာယ်ပြုဖို့ အကြမ်းဖက်ဖို့အတွက် ကားကြီးကို ၀ိုင်းအုံပြီးတော့မှ ထုနှက်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စာပေးဖို့အတွက် မှန်တံခါးကို ခေါက်ပြီးတော့ မှတီရှပ်နဲ့စာထောင်ပြတာပဲရှိတယ်လို့ကျနော်တို့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အစီအရင်ခံစာတွေ အရ သိရပါတယ်။”
မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် ၁၁ ရက်တာအတွင်းရခိုင်၊ကချင်၊ချင်းနဲ့ ရှမ်း ပြည်နယ်တွေ က လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေသွားရောက် လေ့လာခဲ့ရာမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။မစ္စတာ ကင်တားနားက ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေသခံတွေ ဆန္ဒပြမယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ မမျှော်မှန်းထားကြောင်း၊ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်ရတာကို ကြိုဆိုတယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းတဲ့အချိန်မှာ အခုအကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို မစ္စတာ ကင်တားနားက ထည့်သွင်းရေးသားမယ်ဆိုရင် အစိုးရအနေနဲ့ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာနဲ့
ပတ်သက်ပြီး ဦးရဲထွဋ်က အခုလိုပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း ဒါကို မဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြန်ရှင်းပြရမှာပေါ့။ သူနဲ့အတူ အဲတုန်းက မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတချို့လည်းပါလာသေးတယ်။ ရဲကားလည်း ပါတယ်။
ကသူ့ကိုဝိုင်းအုံပြီးအသက်အန္တရာယ် ပြုတဲ့ပုံမျိုးထိဖြစ်အောင် ပြောတာမျိုးကျနော်တို့လည်းစိတ်
မကောင်းဘူး။ဒါကအဖြစ်မှန်နဲ့ လွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့။”ပါဟု သမ္မတပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ
4:20:00 PM Myanmar News Updates No comments
အဘိုးအိုတစ်ယောက်ဟာ ရေနစ်နေတဲ့ ကင်းမြီးကောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါ ရေထဲကဆယ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်...အဲ့ဒီသတ္တဝါလေးဆီရောက်အောင်သူ့လက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်..
စူးခနဲ နာကျင်သွားတဲ့ဝေဒနာကြောင့် အဘိုးအိုက အဲဒီသတ္တဝါလေးကို ပြန်လွှတ်ချလိုက်တယ်... ကင်းမြီးကောက်က ရေထဲပြန်ကျသွားတာပေါ့...
ကင်းမြီးကောက်ရေပြန်နစ်တော့မှာကိုသိတဲ့အဘိုးအိုဟာကင်းမြီးကောက်ကို ပြန်ဆယ်ယူဖို့ကြိုးစားပြန်တယ်... ထိမိတာနဲ့ ကင်းမြီးကောက်ကလည်း သူ့ကိုတုပ်ပြန်ရော... သူကလည်း နောက်တစ်ခါ ထပ်လွှတ်ချလိုက်မိပြန်တယ်...
ဘေးမှာရပ်ကြည့်နေတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်က အဘိုးအိုနားချဉ်းကပ်လာပြီးပြောတယ်...
"ကျွန်တော်တစ်ခုပြောပါရစေခင်ဗျ... ဒီလိုသတ္တဝါဆိုးလေးကို ကယ်တဲ့အတွက် အဘကိုယ်အဘ နာအောင်လုပ်နေသလိုဖြစ်နေတာပဲ... ဘာလို့မရမကလုပ်နေတာလဲ အဘရယ်... အဘက ဒီကင်းမြီးကောက်ကို ကယ်ဖို့လုပ်လိုက်တိုင်း ဒီကောင်ကအဘကို ပြန်တုပ်နေမယ်ဆိုတာ သဘောမပေါက်သေးလို့လားဗျာ..."
"ကင်းမြီးကောက်ရဲ့ သဘောသဘာဝကိုက တုပ်ဖို့လေကွယ်... ကူညီကယ်တင်ရမှာကတော့ ငါ့သဘောသဘာဝပဲ... အဲ့တော့ ကင်းမြီးကောက်ကို ကယ်တဲ့နေရာမှာလည်း ငါ့ရဲ့သဘောသဘာဝက ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး..."
အဲ့ဒီနောက် အဘိုးအိုက ခဏလောက်စဉ်းစားလိုက်ပြီး ဘေးနားမှာရှိတဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်က သစ်ရွက်တစ်ရွက်ကိုခူးယူလိုက်တယ်... သစ်ရွက်နဲ့ ကင်းမြီးကောက်ကို ရေထဲကနေဆယ်ယူပြီး ကယ်တင်လိုက်ပါတော့တယ်...
သင့်ရဲ့သဘောသဘာဝကိုမပြောင်းလဲပစ်ပါနဲ့...တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုအန္တရာယ်ပြုလာမယ်ဆိုရင်တောင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတစ်ခုခုလုပ်လိုက်ရုံပါပဲ...သင်လုပ်ကိုင်သမျှအရာတိုင်းမှာအသိတရားကို ရှေ့ဆောင်ထား
Ref: The Unknown; but not hidden.
ကင်တားနား မိတ္ထီလာက ဘာဖြစ်လို့ ကြောက်ချီးပန်း ထွက်ပြေးရသလဲ
3:37:00 PM Myanmar Newsupdates 1 comment
ကင်တားနား မိတ္ထီလာမှာ ကြောက်ချီးပန်းပြီး ပြေးရတာကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ ထည့်ပြောတဲ့ အခုတော့ “ကမ္ဘာကသိပြီ” “မှတ်ပြီလား အစိုးရမင်းတို့” ဆိုတဲ့အသံတွေ ထွက်လာတဲ့သူတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ဘင်္ဂါလီ နေသန်မောင်(ကမာရွတ်မီဒီယာ)….ဒေါ်စုရဲ့ အွန်လိုင်းတာဝန်ခံ ဒီမိုဖက်တီး (ခွန်ဒီးယမ်)…NLD ထဲက ဘင်္ဂါလီလော်ဘီ ငရဲသား ဒီလူတွေပဲ ဖြစ်တယ်…ငရဲသားဆိုရင် ကင်တားနားဘက်က အခမဲ့ရှေ့နေလိုက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်တွေ ဘာတွေ ထုတ်လို့….တရားကျစရာ..ရယ်စရာ သိပ်ကောင်းနေပါရော…
အဓိက အချက်က ဘာလဲ…မိတ္ထီလာက camp တွေကို ကင်းတားနား မကြည့်နိုင်ခဲ့တာပဲ..မကြည့်နိုင်တော့ ဘာဖြစ်လဲ…ရခိုင်စွပ်စွဲချက်တွေကို မိတ္ထီလာအထိ ဆွဲခေါ်ဖို့ ကြံစည်ထားတဲ့ OIC အကြံတွေ မပြည့်ဝတော့ဘူး…အဲဒီcamp တွေမှာ နေနေကြတာက ပြည်တွင်းနေ ထောင်ကျော်…ဒီနောက်ကွယ်က ကွန်ရက်တွေထဲမှာ OIC-NLD-ဘင်္ဂါလီတွေ အချိတ်အဆက်မိမိ လှုပ်ရှားနေသလား….
ကဲ … မိတ္ထီလာ ကြောက်ချီးပန်းရတဲ့ အဖြစ်ကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်…
၁-ကင်တားနား ရခိုင်မှာလည်း ဒီလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုတာ ခံခဲ့ရတယ်..ဒါပေမယ့် အခုလို မဖြစ်ဘူး…ဘာဖြစ်လို့လဲ..
၂-ရခိုင်မှာကတည်းက ကင်တားနားကို မြန်မာပြည်သူတွေ မုန်းတီးနေကြပြီ…သံဃာတွေနဲ့ တွေ့တော့ မရိုမသေ ဆက်ဆံတယ်…ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့တွေ့တော့ ရိုရိုသေသေ ကျုံ့ကျုံ့လေးနေတယ်..ဒီဓါတ်ပုံတွေ မီဒီယာတွေမှာ မွထနေပြီ..ပြည်သူတွေက ဒီပုံတွေကြည့်ပြီး ကင်တားနားကို မုန်းနေကြပြီ…စော်ကားလိုက်တဲ့ကောင်..မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့ကောင်…ဘာညာပေါ့
၃-ရခိုင်မှာ ၀င်တာက နံနက်ပိုင်း..မိတ္ထီလာ ၀င်သွားတာက ညပိုင်း….နဲနဲလင်းနေမယ်ဆိုရင် ထောင်ကျော်ရှိတဲ့ ကြိုဆိုဧည့်ခံသူတွေကို ကင်တားနားတွေ့ရမှာ…အခုတော့ ရာကျော်ပဲ ရှိတယ်… ဒါပေမယ့် ညမှောင်ချိန်ကို သတိပြုဖို့ လိုတယ်…ရှေးလူကြီးသူမတွေ ပြောတဲ့ အပုပ်ချိန်ဆိုတာ …အမှောင်ထုရဲ့ တွန်းအားပေးမှုက ကြာရှည်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးကို အခုလို စိတ်ရိုင်းဝင်လာစေတာပဲ…
၄-ဒါမျိုးက နိုင်ငံတကာက ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုတွေမှာ အမြဲကြုံတွေ့နေရတာပဲ…လူအုပ်များပြီး အရှိန်ကောင်းလာပြီ ဆိုရင် ဟိုဟာဖျက် ဒီဟာဖျက် ဒါ လူ့သဘောသဘာဝပဲ…ကင်တားနားကို ကားတံခါး ထုရိုက်တာ ဒီလောက် မဟုတ်ဘူး…ကင်တားနားရဲ့ ကြောက်စိတ်က အဓိကပဲ..နိုင်ငံတကာက UN ၀န်ထမ်းတွေ အသတ်ခံရတာ…အများကြီးပဲ..ဒီကြားက လုပ်နေကြရတာ..
၅-အဓိက အချက်က ကင်တားနားရဲ့ ဆိုက်ကို ပဲ..ကင်တားနားဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက သူ့မိဘတွေကို အကြမ်းဘက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တာကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အာဂျင်တိုင်းတစ်ယောက်ပဲ..သူ့ကို us နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပြီး အခုလို ပညာတွေတတ်လာ..လူတစ်လုံး ဖြစ်လာတာပဲ..ဒါပေမယ့် ကလေးအရွယ်ကတည်းက ကြုံခဲ့ရတဲ့ အကြမ်းဘက်မှုဟာ ကင်တားနားစိတ်ထဲမှာ ဆိုက်ကိုဝင်နေတယ်…အမှန်တော့ ဒီလို စိတ်အခြေအနေ ပုံမှန် မဟုတ်ဘဲ ဆိုက်ကိုဝင်နေတဲ့သူတွေကို un ၀န်ထမ်း မခန့်သင့်ဘူး….
၆-ဖြစ်တာက နဲနဲ …ဒါပေမယ့် ကင်တားနား ကြောက်တာက များများ…သူ့စိတ်ထဲက ဆိုက်ကိုရယ်..မိတ္ထီလာ ဖြစ်စဉ်က ပုံရိပ်တွေရယ်..စုပေါင်းပြီး ကြောက်ချီးပန်းသွားတာ…ပြီးတော့ ချက်ချင်းပဲ ပြန်တော့မယ် ဖြစ်လာတာ…တစ်ကယ်တမ်းက သူ့မစ်ရှင်ကိုသူ ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်…မိတ္ထီလာကို သူ ဘာလုပ်ဖို့ လာတာလဲ…IDP Camp တွေကို ကြည့်ဖို့ ဆိုရင် ရောက်အောင်သွား မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲ လိုတယ်…အခုဟာက ကြောက်လို့ ပြန်လာတာပါ ဆိုတဲ့ စကားက UN ၀န်ထမ်း မပီသဘူး..သူ့ကို ပေးထားတဲ့ mandate ကို မကျေဘူး…
၇-ကင်တားနား ဒီလို မသွားဖြစ်တော့ ဒီ camp တွေကို အကြောင်းပြုပြီး အစဆွဲထုတ်မယ့် အဖွဲ့တွေ ငုတ်တုပ်မေ့သွားတယ်..OIC-ဘင်္ဂါလီ ကျိန်းသေ အကြံပျက်သွားတယ်..ဒီကြားထဲမှာ ဒီအစကို ပြည်တွင်းမှာ ဆွဲထုတ်လာတာက NLD ထောက်ခံသူတွေ အမာခံတွေ ဖြစ်နေလေတော့ OIC-ဘင်္ဂါလီ ကွန်ရက်မှာ NLD ဘယ်လိုပါနေသလဲ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာတယ်..
-ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင် ဒါက ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပဲ..မိတ္ထီလာက ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေဟာ ကားမှန်ကွဲအောင်…ကားတံခါးတွေ ပျက်စီးသွားအောင် လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး..လူအုပ်စုနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ခံစားမှုအရ တဒင်္ဂ လှုံ့ဆော်မှု ဖြစ်ခဲ့ရတာပဲ…ဒီဆန္ဒပြမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့တာ မိတ္ထီလာ ရှစ်ပူးတွေကလည်း အကြမ်းမဘက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပဲ လုပ်ခဲ့ကြတာ..
-ကင်တားနား မလာခင် အခြေအနေ..ရခိုင်က သံဃာတွေနဲ့ တွေ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ..ကင်တားနားရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ..ဒါတွေကို မူတည်ပြီး အမှတ်မထင် ဖြစ်သွားတာပဲ…ဒါကို အခွင့်ကောင်းပဲ ဆိုပြီး အပုပ်ချနေတဲ့ မီဒီယာတွေ NLD တာဝန်ခံတွေအနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို လျစ်လျူရှုရာ ရောက်နေတယ်..ဒီကိစ္စက နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်စရာ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး…မြန်မာပြည်သူအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိစ္စသာ ဖြစ်တယ်..
-ပြည်သူတွေဘက်ကို ကြည့်ရင် လူကို ကန့်ကွက်နေတာပဲ ဖြစ်တယ်…UN ကို ဆန့်ကျင်နေတာ မဟုတ်ဘူး..UN ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပယ်ချနေတာ မဟုတ်ဘူး…
မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ UN အဖွဲ့အစည်းတွေ UN ၀န်ထမ်းတွေကို ဒီလို ဆက်ဆံတာ မဟုတ်ဘူး…
မြန်မာပြည်မှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ UN Project တွေကို ဖျက်ဆီးနေတာ မဟုတ်ဘူး…
ဘာဖြစ်လို့လဲ..မြန်မာပြည်သူတွေဟာ UN ကို အလေးထားတယ်..လေးစားတယ်..စော်ကားဖို့ ဘယ်တော့မှ မရည်ရွယ်ဘူး..အကြောင်းရင်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိတယ်..
ဘာဖြစ်လို့လဲ UN အတွင်းရေးမှူး လုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးသန့်ကြောင့်ပဲ..ဦးသန့်နဲ့ဆက်စပ်ပြီး UN ကို အလိုအလျောက် ထောက်ခံကြတာ ဒါ မြန်မာတွေပဲ သိတယ်..
ဆန့်ကျင်တာ..ကန့်ကွက်တာက..ကင်တားနား တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ…မြန်မာတွေ ဘန်ကီမွန်းကို မဆဲဘူး..မဆန့်ကျင်ဘူး…UN ကို ထွက်သွားကြ မပြောဘူး….ကင်တားနားရဲ့ တစ်ဦးချင်းလုပ်ဆောင် ချက်ကို ကြည့်ပြီး ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေ ဖြစ်လာတာပဲ..ကင်တားနားကို မယုံဘူး..ကင်တားနားဟာ ဘက်လိုက်တယ်…ကင်တားနားဟာ မြန်မာပြည်ကို ဒုက္ခပေးမယ် ဒါတွေကြောင့်ပဲ အခုလို ဖြစ်လာတာပါ…
အချုပ် သုံးသပ်ကြည့်ရင် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် တစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်…သူ့မစ်ရှင်ကို ပြီးမြောက်အောင် မလုပ်ခဲ့တာကတော့ ကင်တားနားရဲ့ ဆိုက်ကိုနဲ့သာ သက်ဆိုင်တယ်…မြန်မာတွေက UN ကို မဆန့်ကျင်ဘူး….
နောက်ဆုံးအချက်က ဒီဖြစ်ရပ်ကို အကြောင်းပြုပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်လိုတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ..ဘင်္ဂါလီလော်ဘီ NLD အမာခံတွေ နိုင်ငံအကျိုးကို ကြည့်ကြဖို့ပဲ သတိပေးချင်တယ်.
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာမိန်းကလေးအား မွတ်ဆလင် မုဒိမ်းကျင့်သည့် ကိစ္စ အေဂျင်စီများအသင်းချုပ် သွားရောက် ညှိနှိုင်းမည်
မလေးရှားနိုင်ငံ ဂျိုဟိုးတွင် မုဒိမ်းကျင့်ခံရသူ မြန်မာအမျိုးသမီး အလုပ်သမားကိစ္စ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် အေဂျင်စီများ အသင်းချုပ်သည် သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းလှိုင်က ပြောကြားသည်။
ယင်းအမျိုးသမီးသည် လတ်တလောတွင် ဂျိုဟိုး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ၎င်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာရန် ဆန္ဒမရှိသည့်အတွက် သူ၏သဘောအတိုင်း အဆင်ပြေစေရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုသည်။
“အလုပ်ပြောင်းမယ်ဆိုလည်း ပြောင်းပေးမယ်။ ကိုယ့်အလုပ်သမားတွေ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ” ဟု အေဂျင်စီများအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌက ပြောဆိုသည်။
ဂျိုဟိုးပြည်နယ်၊ Panasonic ဖုန်းထုတ်လုပ်သည့် Flairis Shd B hd စက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများ နေထိုင်သည့် အဆောင်ကို သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ ညနေ ၁၀ နာရီခန့်က လူအုပ်စုလိုက် ဝင်ရောက်၍ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဖမ်းခေါ်မုဒိမ်းကျင့်ပြီး အဆောင်အနီး လမ်းမတွင် ပစ်ချခဲ့ကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါပြစ်မှု ကျူးလွန်သူကို စုံစမ်းသိရှိပြီးဖြစ်ပြီး အရေးယူရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ မြန်မာအလုပ်သမားများ လုံခြုံရေးနှင့် အခွင့်ရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအရာရှိက ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးအောင်က ပြောကြားသည်။
3:32:00 PM Myanmar News Updates No comments
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောနယ်စပ်နတ်မြစ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင် ရေလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းပြုနေကြသော ဒေသခံရေလုပ်သား တံငါသည်များမှာ ကောလာဟလ သတင်း များကြောင့် နေရပ်ပြန်နေထိုင်ကြကြောင်း ဒေသခံရေလုပ်သားများ၏ပြောပြချက်များအရသိရသည်။
မောင်တောနယ်စပ်နတ်မြစ်ကမ်းခြေတစ်လျောက်၌ ယာယီတဲအိမ်များဆောက်လုပ်ပြီးရေလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေကြသည့် တံငါသည်အိမ်ထောင်စု(၅၀)ခန့် နှင့်ရေလုပ်သားအရေ အတွက်(၂၅၀)ခန့်ရှိပြီး ၄င်းတို့အနေဖြင့်အတည်မပြုနိုင်သော ကောလဟသ သတင်းများကြောင့် စိတ်ပူပင်ကြောင့်ကျလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
“ RSO(ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး)ကဒီကနေ့လာ၊ မနက်ဖြန်လားဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ေ ဒသခံရေလုပ် သားတွေ ကို လက်စသတ် သုတ်သင်ရှင်းလင်းသွားမယ် ဆိုတဲ့သတင်းကြားလို့ ရေလုပ်သားတော်တော်များများ နီးစပ်ရာဒေသခံကျေးရွာတွေ ကိုနေရပ်ပြန် သွားကြပါပြီ” ဟုတောင်ပြိုလက်ဝဲနတလကျေးရွာမှရေလုပ်သားတစ်ဦးကဆိုသည်။
အဆိုပါသတင်းစကားများမှာ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ဒေသခံများအပေါ်တွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဖြစ်ပေါ် စေရန် ခြိမ်းခြောက်မှုများအသွင်ဖြစ်လာကြောင်း ဒေသခံတို့က သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
`ဒီလိုသတင်းတွေအဆက်မပြတ်ကြားနေရတော့ ဘယ်သူကလုံခြုံရေးကင်းမဲ့တဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ဆက်ပြီးနေရဲမှာလဲဗျာ။ စိတ်ခြိမ်းခြောက်မှု လွတ်ကင်းတဲ့ နေရပ်တွေကိုပြန်သွားကြတာပေါ့“ ဟု တောင်ပြိုလက်ဝဲနတလကျေးရွာမှ ရေလုပ်သားတစ်ဦးကဆိုသည်။
အဆိုပါရေလုပ်သားများမှဖမ်းဆီးရရှိလာသည့်ရေထွက်ပစ္စည်းများကိုတစ်ဆင့်ခံဝယ်ယူပြီးဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှသို့ တင်ပို့နေသည့်ဒေသခံငါး၊ပုစွန်၊ ကဏန်းအ၀ယ်ဒိုင်အရေအတွက်(၁၈)ဒိုင် ရှိကြောင်းနံ့သာတောင်ကျေးရွာ အနီး ငြိမ်းချမ်းရေကဏန်းအ၀ယ်ဒိုင်မှကိုမောင်ကျန်ကပြောကြားသည်။
ယခုလသြဂုတ်လ ပထမပတ်အတွင်းမှစပြီးနတ်မြစ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ရှိ ရခိုင်ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ရေလုပ်သား တံငါသည် စခန်းများနှင့်ရေလုပ်သားများ အားလုံးကို အာအက်(စ်)အို(ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး) အကြမ်းဖက်စစ် သွေးကြွအဖွဲ့ကသုပ်သင်ရှင်းလင်းသွားမည်ဟုဆိုသည့် သတင်းထွက်ပေါ်လာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ခက်ခဲသည့်ဒေသဧည့်နေဘဂါင်္လီတစ်ချို့၏ထပ်ဆင့်ပုံကြီးချဲ့သတင်းခြောက် လှန်မှု့ကြောင့်ဒေသခံရေလုပ်သား များမှာ ဆက်လက်နေထိုင် မလုပ်ကိုင်ရဲကြဘဲနေရပ်ပြန် သွားကြရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနတ်မြစ်ကမ်းခြေအောက်ပြုံးမကျေးရွာမှရေလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကပြောသည်။
`ဒီလိုသတင်းတွေထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာ သက်ဆိုင်ရာကလည်း စစ်ဆေးပြီးတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ နို့မို့ရင် လုပ်သားခက်ခဲမှုနဲ့ ဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်`ဟု နတ်မြစ်ကမ်းအောက်ပြုံးမ ကျေးရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
1:49:00 PM Myanmar News Updates No comments
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ်-၁၉ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် ရိုက်ကူးရသည့် ပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံမှာ ပြင်ပရုပ်ရည်နှင့်ကွာခြားပြီး ရုပ်ဆိုးနေသည့်အတွက် ပတ်စ်ပို့လျှောက်ထားသူများ၏ တိုင်ကြားမှုများရှိနေသော်လည်း အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ မြို့ပြလေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း (ICAO)၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စီစဉ်ရိုက်ကူး ရခြင်းကြောင့် ပြင်ပမှရိုက်ကူးလာသော ဓာတ်ပုံများကို လက်ခံနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရေးရုံး၊ ဓာတ်ပုံဌာနမှ ဒုတိယရဲမှူးကြီးကျော်ဇေယျက ပြောကြားသည်။
“ဓာတ်ပုံတွေကို ပတ်စ်ပို့စာအုပ်မှာ တစ်ခါတည်းကပ်ပေးနိုင်ဖို့ ရေမစိုမပျက်စီးအောင် လင်မနစ်အုပ်ပေးရတယ်။ အပူပေးရတယ်။ ဓာတ်ပုံစက္ကူနဲ့ ထုတ်တာလည်းမဟုတ်တော့ အပြင်ဓာတ်ပုံနဲ့တော့ကွာတယ်။ ဒါ့အပြင် ICAO ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ ဓာတ်ပုံတစ်ခုလုံးရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ လူရဲ့မျက်နှာကိုယူထားတဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပြူးပြူးကြီးနဲ့ မျက်နှာတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာကြောင့် ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒုတိယရဲမှူးကြီးကျော်ဇေယျကပြောကြားသည်။
ပတ်စ်ပို့လျှောက်ထားသူများကလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခ ကျပ် ၃၂၀၀ ပေးသွင်းရသည့်အပြင် မိမိသွားလေရာ နိုင်ငံတိုင်းသို့ ယူဆောင်သွားရမည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတိုင်း ၏ လေဆိပ်သို့ ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိရုပ်ရည်ကို ပင် ပြန်လည်မမှတ်မိနိုင် သည်အထိ ပုံထွက် ဆိုးရွားလွန်းသည့် အပေါ် စိတ်တိုင်းမကျမှု များစွာဖြစ်နေကြရသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိစိတ်တိုင်းကျ ပြင်ပမှ ရိုက်ကူးလာ သည့် ဓာတ်ပုံများကို လက်ခံပေးစေလိုကြောင်း ပတ်စ်ပို့လျှောက်ထားသူ များနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းမှသိရသည်။
“ကျွန်မခင်ပွန်းဆို ထွက်လာတဲ့ သူ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီး တော်တော်လေးစိတ်ဆိုးလို့ ဆွဲဖြဲပြီး နောက်ထပ်တစ်ခေါက် ထပ်ရိုက်တယ်။ နောက်တစ်ခေါက်မှာလည်း သိပ်မထူးပါဘူး။ သူလည်း ထွက်ရခါနီးတော့ ဒါကိုအရေးလုပ်မနေနိုင်ဘူး။ စိတ်တိုင်းမကျလည်း ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အပြင်ဓာတ်ပုံမှ ဒီရုံးကလက်မခံတာ။ ကျွန်မပုံဆိုလည်း မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။ တော်တော်ရုပ်ဆိုးနေတာ”ဟု ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ခေတ္တအလည်အပတ်သွားရောက်ရန် သြဂုတ် ၁၃ ရက်က ပတ်စ်ပို့လာရောက်လျှောက်ထားသူ အသက်(၃၀)အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောကြားသည်။
ပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသည့် ကင်မရာကို ပတ်စ်ပို့စာအုပ်ထုတ်ရန် သီးသန့်ဆော့ဖ်ဝဲ ထည့်သွင်းထားသည့် ကွန်ပျူတာဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ရိုက်ကူးလိုက်သောဓာတ်ပုံများမှာ ယင်းဆော့ဖ်ဝဲမှတစ်ဆင့် ဓာတ်ပုံကူးစက်ထဲ ရောက်ရှိသွားသည့်အတွက် ပြင်ပဓာတ်ပုံများကို လက်ခံပါက အချိန်ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒုရဲမှူးကြီးကျော်ဇေယျကပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့က တစ်နေ့တစ်နေ့ လူနှစ်ထောင်လောက်ကို တစ်ယောက်ချင်း ဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ရိုက်ပြီး ကူးစက်ထဲတန်းပို့နေရတာ။ စံသတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီ ပြင်ပက ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လာတယ်ထားဦး၊ အဲဒီလူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ပုံတွေကို ကျွန်တော်တို့စက်ထဲထည့်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်တာက ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ပတ်စ်ပို့ဟာ ဘယ်နိုင်ငံလေဆိပ်ကမှ အငြင်းမခံရရေးပဲ”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြို့ပြလေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း(ICAO)၏ ခရီးသွားလမ်းညွှန်စာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များထဲတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာ၌ ရိုက်ကူးရသည့် ဓာတ်ပုံသည် ကင်မရာကို တည့်တည့်ကြည့်ရခြင်း၊ မျက်လုံးအရောင်အနီမဖြစ်ရခြင်း၊ မျက်နှာကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းများ မရှိရခြင်း၊ အရိပ်မထိုးရခြင်း၊ မှောင်လွန်းခြင်း၊ လင်းလွန်းခြင်းမရှိရခြင်း စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ရိုက်ကူးပြီးဓာတ်ပုံများကို အလင်းအမှောင်မှအပ မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်မျှ ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်ရဘဲ အရှိအတိုင်းသာ သုံးစွဲရကြောင်း ဒုတိယရဲမှူးကြီးကျော်ဇေယျက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
“စင်ကာပူက မြန်မာသံရုံးမှာ အရင်ကပတ်စ်ပို့သက်တမ်းသွားတိုးရင် အပြင်ကရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံပေးလို့ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ အခု အဲဒီသံရုံးကပါ အပြင်ပုံဆို လက်မခံတော့ဘူး။ သူတို့ရိုက်ပေးတဲ့ပုံ သုံးခိုင်းတယ်။ ပိုက်ဆံပေးရလည်း စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိဘူး”ဟု စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ် အီလက်ထရွန်နစ် အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး၌ ပတ်စ်ပို့လျှောက်ထား ရာတွင် ဖြေလျှော့မှုများပြုလုပ် ပြီးသည့်နောက်မှစ၍ တစ်ရက်လျှင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားသူပေါင်း တစ်ထောင့်ငါးရာဝန်းကျင် ရှိပြီး တနင်္လာ၊ သောကြာနေ့များတွင်မူ နှစ်ထောင်ကျော်ခန့်ရှိကြောင်း အဆိုပါရုံးမှသတင်းရရှိသည်။
နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရသော ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုရန်နိုင်ကလည်း မိမိဧည့်ခံလမ်းညွှန်ရသော နိုင်ငံအများစုမှ ဧည့်သည်များ၏ပတ်စ်ပို့စာအုပ်များကို တွေ့မြင်ဖူးပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မှ ထုတ်ပေးသည့် ပတ်စ်ပို့စာအုပ်ပါ ဓာတ်ပုံများကဲ့သို့ ရုပ်ရည်ဆိုးရွားခြင်းမရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
“အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ စပိန် စတဲ့နိုင်ငံတွေက ဧည့်သည်တွေရဲ့ ပတ်စ်ပို့စာအုပ်တွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့ဓာတ်ပုံက ဓာတ်ပုံဆိုင်တွေမှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေအတိုင်းပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဆီက ပုံတွေလိုမဆိုးဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပတ်စ်ပို့လျှောက်တုန်းကလည်း ကိုယ့်ပုံကိုယ် မမှတ်မိလောက်အောင် ဖြစ်သွားဖူးတယ်။ ဘာကွာလဲတော့မသိပါဘူး”ဟု ကိုရန်နိုင်ကပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို ၂၀၁၀ ဧပြီလမှစ၍ စက်ဖြင့်ဖတ်ရှုစစ်ဆေးထုတ်ပေးသည့်စနစ် (Machine Readable)သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ သုံးနှစ်နီးပါးအတွင်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ပေါင်း တစ်သန်းနှင့်နှစ်သိန်း ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ဖြေလျှော့မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၀၁၃ မတ်လမှစ၍ ယခုသြဂုတ်လအထိ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေါင်း ခန့်မှန်းခြေ တစ်သိန်းနှစ်သောင်း ၀န်းကျင်ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယရဲမှူးကြီးကျော်ဇေယျက ပြောကြားသည်။
1:39:00 PM Myanmar News Updates No comments
အမျိုးသမီးများ၏ ပင်ကိုသဘာဝကြောင့် အဖြစ်များသော ရောဂါများအနက် ဆီးလမ်းကြောင်း အတွင်း ပိုးဝင်ခြင်း (ခေါ်) ဆီးအိမ်ရောင် ခြင်းသည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ဆီးအိမ်နှင့်
ဆီးလမ်းကြောင်းထဲသို့ ပိုးဝင်ခြင်းမှာ အသက်အန္တရာယ်ကို မထိခိုက် စေနိုင်သော်လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသော ရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဆီးအိမ်ရောင် သည်နှင့် အောက်ပါအတိုင်း ခံစားရတတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
စူပါ ဖလားတွင် အက်သလက်တီကိုနှင့် သရေသာ ကစားနိုင်ခဲ့သည့် ဘာစီလိုနာ
1:25:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
စပိန်စူပါ ဖလား ပထမ အကျော့ ပွဲစဉ်ကို မက်ဒရစ်တွင် ယမန်နေ့ညက ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ရာ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ်နှင့် ဘာစီလိုနာတို့ သရေ ရလဒ်ဖြင့်သာ ပွဲပြီး သွားခဲ့သည်။
အိမ်ရှင် အက်သလက်တီကို အသင်းသည် ဒေးဗစ်ဗီလာ၊ အာဒါတူရန်၊ ဒီယေဂို ကော်စတာ၊ ဂါဘီဖာနန်ဒက်ဇ်၊ မာရီယိုဆွာရက်ဇ်၊ ဂျော့ဂ်ျကိုကီ၊ ဖိလစ်ပီ၊ ဒီယေဂို ဂေါ်ဒင်၊ မီရန်ဒါ၊ ဟွမ်ဖရန်တို့ဖြင့် ပွဲထွက်လာခဲ့သည်။ ဘာစီလိုနာဘက်တွင်မူ ပက်ဒရို ရိုဒရီဂွတ်ဇ်၊ လီယွန်နယ်လ်မက်ဆီ၊ အလက်ဆစ် ဆန်းချက်ဇ်၊ အန်းဒရက်စ် အင်နီယေစတာ၊ ရှာဗီဟာနန်ဒက်ဇ်၊ ယော်ဒီအယ်လ်ဘာ၊ ဟာဗီးယား မာရှေယာနို၊ ဂျရတ်ပီကေး၊ ဒန်နီအဲလ်ဗက်စ်တို့ ပါဝင်ကစားခဲ့ကြသည်။
ဗင်းဆင့်ကယ်လ်ဒါရွန် ကွင်းကြီးအတွင်း ကစားသော ပွဲစဉ်၌ ပွဲချိန် (၁၂)မိနစ်တွင် အိမ်ရှင် အက်သလက်တီကို ဂိုးစတင် သွင်းယူခဲ့သည်။ တန်ပြန်တိုက်စစ်မှတစ်ဆင့် အချိတ်အဆက်မိမိ ထိုးဖောက်လာပြီးနောက် ဘယ်ခြမ်းမှ တူရန် ဖြတ်ပို့လိုက်သော ဘောလုံးကို ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဗီလာက ဧရိယာထဲတွင် ချိုးကန်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘာစီလိုနာတို့ ချေပဂိုးရရန် ပိုမိုရုန်းကန်လာပြီး ဒုတိယပိုင်း (၅၉)မိနစ်တွင် နေမာ ဝင်ကစားခဲ့သည်။ (၆၆)မိနစ်တွင် လူစားဝင် တိုက်စစ်မှူး နေမာက ဘာစီလိုနာအတွက် လိုအပ်သော ချေပဂိုးကို သွင်းယူပေးခဲ့သည်။ ညာခြမ်းမှ အဲလ်ဗက်စ် အမြောက်ကန်တင်ပေးလိုက်သော ဘောလုံးကို နေမာက ဂိုးသမား သီဘောက်ကော့ထရစ် ပိတ်ထားသည့် ထောင့်ကျဉ်းထဲ ခေါင်းတိုက်ထည့်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုပွဲ သရေရလဒ်ကြောင့် ဘာစီလိုနာအတွက် နောက်တစ်ကျော့ အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွင် အခြေအနေ ပိုကောင်းလာဖွယ် ရှိနေသည်။ နူးကမ့်တွင် ဒုတိယအကျော့ ပွဲစဉ်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌ ကစားမည် ဖြစ်သည်။
12:36:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ဘဝ မှာအချိန်တစ်နာရီ ပိုအိပ်ရုံဖြင့် ပြောင်း လဲနိုင်တာတွေဟာ အများကြီးပါလို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အချိန်တစ်နာရီပို၍ အိပ်စက်ရုံဖြင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၊အိမ်ထောင်ရေးသာ ယာမှုတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါ တယ်။ တကယ်လို့သင့်ရဲ့အချိန်ဟာ (၇)နာရီနဲ့ (၈)နာရီအောက်ရောက်နေ ရင်တော့အောက်မှာ ကွန်ပျူတာစော စောပိတ်ပြီး စောစောအိပ်သင့်တဲ့အ ကြောင်းပြချက် (၉)မျိုးကိုဖော်ပြလိုက် ပါတယ်။
လုံလောက်စွာမအိပ်သူတွေမှာ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုး ခြင်း နှလုံးရောဂါစတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ရော ဂါတွေ ပိုဖြစ်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ နေ့ဆိုင်း အလုပ်ဆင်းသူ ကျန်းကျန်းမာမာ အလုပ်သမားလူငယ် (၁ဝ)ဦးကို ည တိုင်းဆင်းခိုင်းပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာ သောအခါ ထိုသူတို့၏သွေးတွင်း သကြားဓာတ်မှာ ဆီးချိုဖြစ်ခါနီး လူ တစ်ယောက်ရဲ့သကြားဓာတ်နီးပါးမြင့် တက်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။
National Sleep Founda tion မှ ပြောပြချက်အရ လူအားလုံးရဲ့ ၂၆%ဟာအိပ်ရေးမဝဘဲ ပင်ပန်းနွမ်း နယ်နေမှုကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး သုခလုံလောက်စွာမရကြောင်း တွေ့ရ တယ်။ အိပ်ချိန်လုံလောက်စွာ မရ သောသူများတွင် testosterone ဟုခေါ်သည့် လိင်နှင့်ပတ်သက်သော hormone ကျလာကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
(၃) အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် နာကျင်မှုဝေ ဒနာများကို သက်သာစေနိုင်
တကယ်လို့များ သင့်မှာ လတ် တလောဒါမှမဟုတ် ယခင်ရရှိခဲ့သော ဒဏ်ရာတစ်ခုခုကြောင့် နာကျင်မှု ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုရင် အိပ် ပျော်အောင်သာအိပ်လိုက်ပါ။ အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် နာကျင်မှုဝေဒနာ ခံစားရမှုလျော့နည်းလာကြောင်းကို လေ့လာမှုတွင်အများကြီး လုပ်ပြီး သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းစွာဘဲ နာကျင်နေခြင်းက အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေး ပါတယ်။
US Institute of Medicine မှ လေ့လာမှုတစ်ခုအရှ့ တွင် ယာဉ်တိုက်မှု(၅)မှုဖြစ်တိုင်း (၁)မှုမှာ အိပ်ရေးမဝသည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ရသည်ဟုသိရပါတယ်။
(၅) အိပ်ရေးဝလျှင် တက်တက်ြွကြွက ရှိစေပါတယ်။
အိပ်ရေးဝဝအိပ်တဲ့နေ့တိုင်း စိတ် ချမ်းသာဖွယ်ရာ တက်တက်ြွကြွက ရှိလိမ့်မယ်လို့တော့ အာမခံနိုင်ပေမယ့် အိပ်ရေးမဝလျှင်တော့ စိတ်တိုလွယ်၊ ဒေါသထွက်လွယ်တယ်ဆိုတာ သတိ ထားမိမှာပါ။ သင့်ရဲ့ သူဌေးကို စိတ်မ ထိန်းနိုင်ဘဲ နင်ပဲငဆပြန်ပြောမိတာ မျိုးတွေ၊ စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရခက်ခဲတာ မျိုးတွေဟာ အိပ်ရေးမဝတဲ့နေ့တွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အိပ်ရေးဝဝအိပ်လျှင် ကိုယ်အ လေးချိန် ထိန်းနိုင်ပါတယ်။ အပြန်အ လှန်အားဖြင့်ကောင်းကောင်းမအိပ်တဲ့ သူတွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ပိုတိုးတတ် ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။
(ခ) Leptin ဆိုတဲ့ hormone က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစာစားချင်စိတ်ကို တင်းတိမ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါ တယ်။ တကယ်လို့အိပ်ရေးဝဝမအိပ် ထားတဲ့ သူတွေမှာတော့ Leptin ပမာဏကျသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ရေးမဝပင်ပန်းနေတဲ့လူတွေဟာ တင်းတိမ်တယ်မရှိဘဲအဆက်မပြတ် အဆီများတဲ့အစာတွေ၊ကယ်လိုရီများတဲ့ အစာတွေ စားလေ့ရှိပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်ခြင်းက သင့်ရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ သင်ယူနိုင်စွမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ရမှုတို့အပေါ်မှာ သက် ရောက်မှုရှိပါတယ်။
သင်ခဏခဏမေ့တတ်နေပြီး လား၊ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့အိပ် ရေးပျက်ခံတတ်တဲ့ အကျင့်ကို အရင် ဆုံးအပြစ်တင်လိုက်ပါ။ လေ့လာမှု တစ်ခုအရအိပ်ပျော်နေစဉ်မှာကျွန်တော် တို့ဦးနှောက်ကနေ့ခင်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို စနစ်တကျသို လှောင်ပေးပါတယ်၊၊အိပ်ရေးပျက်သူတွေ မှာတော့ဦးနှောက်ကကောင်းကောင်းသို လှောင်ချိန်မရှိတဲ့အတွက် မှတ်Óဏ် ကိုကျစေနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုအသေးစားတစ်ခု တွင် လူ(၁၅ဝ)ဦးအား နှစ်ပတ်ကြာ သူတို့ရဲ့ အိပ်စက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ပြီး ထိုသူများအား အအေးမိခြင်းဖြစ်စေ သည့် Cold Virus နှင့် ထိတွေ့စေ သည့်အခါ တစ်ညလျှင် ည၇နာရီသာ အိပ်သောသူများသည် ၈နာရီအိပ် သောသူများထက် အအေးမိခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေသုံးဆခန့်ပိုများကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုက သေး ငယ်တဲ့အပြင် တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ဖို့ ဆိုရင်တော့ လေ့လာမှုတွေအများကြီး လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။
လီဝန်ဒေါစကီးကို လစာပေါင် ၃သန်း တိုးပေးလိုက်ပြီ
12:34:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ဘိုင်ယန်ကို ပြောင်းချင်ပေမယ့် ဒေါ့မွန်က ခွင့်မပြုလို့ မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ တိုက်စစ်မှူး လီဝန်ဒေါစကီးဟာ အခုအခါမှာတော့လစာငွေ ပေါင် ၃သန်း ပိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ့မွန်နဲ့ လီဝန်ဒေါစကီးတို့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်ဟာ လာမယ့်နှစ်မှာ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး လီဝန်ဒေါစကီးက စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။လီဝန်ဒေါစကီး
ဟာ ဒေါ့မွန်မှာ တစ်နှစ်လုပ်ခ ပေါင် ၁.၃သန်းပဲ ရခဲ့ပေမယ့် မနှစ်တုန်းက ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ့မွန်က ပေါင် ၄.၃သန်းထိ တိုးပေးခဲ့ပြီး ဒီနောက်မှာတော့ ဒေါ့မွန်မှာ တစ်ရာသီထက် ပိုကစားဖွယ်ရှိတယ်လို့ လီဝန်ဒေါစကီးက ဆိုလာပါတယ်။
“အသင်းပြောင်းခွင့်ရမယ်လို့ ထင်ခဲ့ပြီးမှ အသင်းမပြောင်းနိုင်ခဲ့တာကို စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အဆင်မပြေတာတွေကို ဘေးချိတ်ထား လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးဆိုရင် အသင်းမှာ တစ်ရာသီထက် ပိုကစားဖို့ ရှိပါတယ်”ဟု လီဝန်ဒေါစကီးက ဆိုခဲ့တာပါပဲ။
12:29:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ဒီမီးရထားလမ်းကို 1881ခုနှစ်မှစတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ယနေ့ တိုင်
ကနေဒါနိုင်ငံ မွန်ထရီအော ဗင်ကူးဗားမြို့မှတဆင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ
ချီကာဂိုမြို့ ၊ ဒက်ထရွိုက်မြို့ ၊ နယူးယော့ခ်မြို့ တို့ ကိုကျော်ဖြတ်ကာ
အတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေ (ပစိဖစ် သမုဒ္ဒရာဘက်)အထိ
ကုန်စည်ပို့ ဆောင်ရေးလွယ်ကူစေရန်အတွက် ဖောက်လုပ်ဖို့ 
ဖောက်ထွင်းရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ ဗွီဒီယို ကင်မရာ (That Could See Through People's Clothes. )
11:48:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ Sony ကုမ္မဏီဟာ အင်္ကျီအ၀တ်အစားတွေကို ဖောက်ထွင်းရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ ဗွီဒီယို ကင်မရာ ၇၀၀၀၀၀ ကျော်ကို ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီဖြစ်စဉ်ဟာ မတော်တဆဖြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Infrared Light တွေထုတ်ပေးတဲ့ မှန်ဘီလူးတွေ မှားယွင်းတပ်ဆင်မိတဲ့အတွက် ဒီလိုဖြစ်တာပါ။
ဒီကင်မရာကို ဒေါ်လာ ၆၀၀ နဲ့ ရောင်းချခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ထဲက သိမ်းနိုင်သလောက်ပြန်သိမ်းခဲ့ပေမယ့် တော်တော်များများ ကျန်ပါသေး တယ်တဲ့။
The cameras had special lenses that use infrared light (IR) to see through some types of clothing,such as on dark colored, thin clothing - like swimsuits. The main factor is how well the fabric absorbs IR light waves. It's not for regular digicams, but rather for camcorders withaIR night vision mode, and the resolution is low.
Sony recalled the camcorders when they found out about this, but the night vision camcorders that they subsequently released,some people figured out how to modify the camera to get the see-through-clothing functionality and hundreds of the modified cameras are for sale on the Internet.The camera with all the filters sells for about $700 brand new, and is easy to obtain.Sony said it has no responsibility for altered or modified products.A lot of people have used this technology for wrong purposes.
9:33:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
Felicia ဆိုသူ ကျောင်းသူသည် သူမ၏ ဘလော့(ဂ်)မှတဆင့် ယခုကဲ့သို့ လိင်စိတ်နိုးကြွစေသည့် အတွင်းခံရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မှာ တစ်လခန့် ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
သူမနှင့် အင်တာဗျူးလုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းမှုများကိုလည်း ငြင်း ဆိုခဲ့ပြီး အခမဲ့ ကြည့်ရှုခွင့်ပေးသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်း ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။
သူမသည် ဘောင်းဘီများကို မရောင်းချခင် ၁၂ နာရီကြာ ၀တ်ဆင်ခဲ့ သည်ဟု သိရပြီး ယခုကဲ့သို့ စွန့်စားလုပ်ကိုင်ရခြင်းမှာ ကျောင်းလခ ပေးရန် အတွက် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
တချို့Myanmar GSM Phone တွေ Message ပို့လို့မရဘူး လက်ခံလို့တော့ရတယ် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ?
9:32:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
မသိသေးသူတွေအတွက် ဒီ post ကိုရေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော့လို မပင်ပန်းစေချင်လို့။ တနေ့က ဦးလေး
တစ်ယောက်က သူ့ ၁၅သိန်းတန်ဖုန်းကို prepaid card စနစ် ပြောင်းချင်လို့ YES လုပ်ပြီး 18812 ကို message ပို့လို့မရဘူးဆိုပြီး လာပြပါတယ်။ အားကိုးတကြီးနဲ့ပေါ့။ ဦးလေးဆီကဖုန်းကိုလှန်းယူပြီး ဟိုကလိဒီကလိနဲ့ လုပ်တတ်သလိုလို လုပ်ကြည့်တယ်။ မရ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Message ရိုက်ပြီး Send ဆိုရပြီလေ ဆိုတော့ ဦးလေးက ဒါကတော့ငါသိတာပေါ့။ Send လိုက်ပြီးဆိုရင် fail ဖြစ်နေလို့တဲ့။ အဲ့လို့နဲ့ 15မီးနစ်ကြာတော့ ဦးလေးကမစောင့်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး သူ့ဖုန်းကို ကျွန်တော့ဆီထားခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ မာလာမှတ်တိုင်နားကမြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးကို ပြကြည့်တယ်။ သူတို့ဒီကိစ်စ သူတို့ဆီမှာလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့်နားက မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးကို ထပ်ညွန်ပါတယ်။ ရွှေဂုံတိုင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံး ကိုရောက်တော့ အဲ့ဒီရုံးကအကိုတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်မှ သိရတာပါ။ သိတော့လဲလွယ်လွယ်လေး၊ မသိတော့လဲ နေပူကြီးထဲ ဒါလေးအတွက်နဲ ပြေးရတယ်။
ကဲ message ပို့မရလို့ဆိုသူများ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါ။
Message box ပုံသင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ > Settings ကိုရှာပါ (အောက်နားမှာရှိတတ်ပါတယ်)> text Message ကိုသွားပါ (တချို့ဖုန်းတွေမှာ text message သွားစရာမလိုပါ) message center ကိုတွေ့ရင် အပေါ်မှာ MPT လို့ရိုက်ပြီး အောက် မှာ +09595930003ရိုက်ပါ ( တချို့ဖုန်းတွေမှာ message center နေရာမှာ service center ဆိုပြီးပါတယ်) +09595930003 ကိုသာရိုက်လိုက်ယုံပါပဲ။ ပြီးရင် Save လုပ်ပြီး message ပို့ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
ပခုက္ကူ စက်မှုဇုန်တွင် အလုပ်ရရှိမှု နည်းပါးလာသည့်အတွက် အလုပ်ရုံအချို့ ပိတ်သိမ်း
9:18:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
ပခုက္ကူ စက်မှုဇုန်ရှိ ကားဝပ်ရှော့၊ တွင်ခုံနှင့် ပန်းပဲလုပ်ငန်းများမှာ ယခင်နှစ်များတွင် မော်တော်ကားများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊ ယာဉ်ဟောင်းများ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ သစ်ထုပ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရောက်မည့် မော်တော်ယာဉ်များအား ယာဉ်ကြံ့ခိုင်မှု ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးရခြင်းများကြောင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် အဆင်ပြေခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင်မူ မော်တော်ကား ထုပ်လုပ်ရောင်းချရန် အဆင်မပြေခြင်းကြောင့် တွင်ခုံနှင့် ပန်းပဲလုပ်ငန်းများမှာ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးလာပြီး ကားဝပ်ရှော့များမှာလည်း ယာဉ်ဟောင်းများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမှု နည်းပါးလာသည့်အတွက် လုပ်ငန်းအများစု ရပ်နားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကားဝပ်ရှော့ လုပ်ကိုင်သူများထံမှ သိရသည်။
"အရင်တုန်းက ခုလိုအချိန်ဆိုရင် သစ်ကွင်းသွားမယ့် ကားတွေကို ယာဉ်ကြံခိုင်ရေး ပြန်စစ်ပေးရတယ်။ လေးထပ်တာတို့ ဖရိန်မြင့်တာတို့ နောက်ကားအင်ဂျင် ပြန်စစ်တာတို့ လုပ်ပေးရတော့ ပန်းပဲသမားရော တွင်ခုံရော ကားဝပ်ရှော့တွေရော အကုန်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ခုနောက်ပိုင်း သစ်ကားတွေက သစ်ကွင်းသိပ်မသွားရတော့ ယာဉ်လာစစ်တာတို့လည်း နည်းသွားတယ်။ ကားဈေးတွေကလည်း တအားကျနေတော့ ၅၅ သိန်းလောက် အကုန်ခံပြီးဆင်တဲ့ ဇုန်ထုတ်ဂျစ်ကားက ပြန်ရောင်းရင် သိန်း ၄၀ လောက်ပဲရတော့ ကားထုတ်တာလည်း မရှိတော့ဘူး။ ကားဟောင်းတွေကလည်း အပ်လိုက်ကြတော့ အရင်လို အဟောင်းပြင်ရတယ် ဆိုတာလည်း မရှိသလောက်ပဲ။ ရွာတွေကကားနဲ့ ခရီးသည်တင် ကားလောက်ပဲ ပြင်ရတော့တယ်။ လုပ်ငန်းအများစုကတော့ ရပ်ထားရတယ်" ဟု ပခုက္ကူ စက်မှုဇုန်တွင် ဂျစ်ကားထုတ်လုပ် ရောင်းချသူ ဦးစန်းမောင်က ဆိုသည်။
ပခုက္ကူ စက်မှုဇုန်ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သော လုပ်သားများမှာ လုပ်ငန်းအဆင်မပြေမှုများကြောင့် အလုပ်ရုံများ ပိတ်သိမ်းလိုက်ရသည့်အတွက် ဆီးခွဲစက်၊ ဆီစက်နှင့် ရေသန့်စက်ရုံများတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်နေရပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ယခင်ထက် နည်းပါးသွားပြီး ဘ၀ရပ်တည်ရေး အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
ပခုက္ကူ စက်မှုဇုန်ရှိ အကြီးစား မော်တော်ယာဉ် ပြင်ဆင်သည့် အလုပ်ရုံတစ်ခုကို တွေ့ရစဉ်
ရခိုင်ပဋိပက္ခများအပြီး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် မလာရောက်၍ မြောက်ဦးမြို့ရှိ ဟိုတယ်အားလုံးနီးပါး ပိတ်ထားရ
9:16:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
ပဋိပက္ခများ ပြီးဆုံးသွားသော်လည်း ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ ၀င်ရောက်မှု မရှိသေးသဖြင့် မြောက်ဦးမြို့ရှိ ဟိုတယ်များအားလုံးနီးပါး ပိတ်ထားရကြောင်း ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြောက်ဦးရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် နယ်မြေသည်
ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားများ စိတ်ဝင်စားမှုများသည့် ဒေသဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှု နည်းပါးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ရပ်နားထားရသကဲ့သို့ ဟိုတယ်များလည်း ပိတ်ထားခဲ့ရကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်များက ဆိုသည်။
ဒေသခံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်ဝင်းက "ဟိုတယ်တွေ အားလုံးနီးပါး ပိတ်ထားရတယ်။ ခရီးသွားတွေ မရောက်တော့ အဆင်
မပြေဘူး။ ဖွင့်ထားရင်လည်း လာတည်းတဲ့လူက တစ်ပတ်မှာ နှစ်ယောက်
သုံးယောက်ဆိုတော့ ရတဲ့ငွေနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က မကာမိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေအားလုံး တစ်နှစ်လုံး အဆင်မပြေဘူး။ ပြီးတော့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွှယ်နေတဲ့ တခြားလုပ်ငန်းတွေလည်း အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် မြောက်ဦးသို့
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည် ၀င်ရောက်မှု ကျဆင်းခဲ့သည့်အပြင် ပြီးခဲ့သော ခရီးသွား ရာသီအတွင်းက ပြည်တွင်းခရီးသွား လာရောက်မှုပါ ကျဆင်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ မြောက်ဦးဒေသသည် ခရီးသွားများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခသည် ခရီးသွားများ လာရောက်မှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက သုံးသပ်သည်။
"ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေ အဆင်မပြေသလို စားသောက်ဆိုင်တွေလည်း အဆင်မပြေကြဘူး။ ကား၊ မြင်းလှည်း အစရှိတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ
လည်း နားထားရတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အေးချမ်းမှသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေလည်း ရောင်းအား
ကျဆင်းသွားတာ တွေ့ရတယ်" ဟု မြောက်ဦးဒေသခံ ဒေါ်နီလာဝင်းက
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် လအနည်းငယ် ခရီးသွား ကန့်သတ်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် ကန့်သတ်နယ်မြေအဖြစ် မှပယ်ဖျက်
လိုက်ပြီ ဖြစ်သည့်တိုင် ခရီးသွား ၀င်ရောက်မှု နည်းပါးဆဲဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများက ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နယ်မြေတည်ငြိမ်မှု အတန်အသင့် ရှိနေပြီ ဖြစ်သော်
လည်း မိုးရာသီ ဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသည် ၀င်ရောက်မှု နည်းပါးနိုင်ခြင်းများကို ရင်ဆိုင်ရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြောက်
ဦးမြို့တွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ တည်းခိုနိုင်သည့် ဟိုတယ်ခုနစ်ခုခန့်
ရှိပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကောင်းမွန်စဉ်က တစ်နှစ်လျှင် ဧည့်သည်သောင်း
ဂဏန်းခန့် လာရောက်လေ့ ရှိသည်။
"လူကြီးတွေ ဘာကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ် သေဆုံးကြရပါသလဲ"
9:11:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
( အသက်ကြီးတဲ.သူတွေအတွက် မှတ်သားသင်.တဲ.အရာမို. ပြန်လည်ဝေငှ လိုက်ပါသည် )
>>> ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ် ၀န်းကျင်လောက်က Thomas Vills “ သောမတ်စ် ဗီးစ် ” ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်သူအရမ်းချ စ်တဲ့ သူ့အဖိုး...သူ့ရှေ့မှာ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်သွား တာကိုကြုံခဲ့ရတယ်..။
ဘာမှ မသိသေးတဲ့ ကလေးလေးဆိုပေမဲ့ သူ့အရမ်းချစ်တဲ့ အဖိုးဖြေးဖြေးလဲကျသေဆုံးသွားပုံကို မျက်စိထဲက မထွက်ခဲ့ဘူး..။
ဒီလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ“ သောမတ်စ် ဗီးလ် ” ဟာ ဆရာဝန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်..။
သူငယ်ငယ်ကတည်းက မျက်စိရှေ့တင် လဲကျသေဆုံးသွားတဲ့ အဖိုးအဖြစ်ကို ဘာကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ရတာလဲလို့ သူ့လေ့လာခဲ့တယ်..။
မလေ့လာရင်သာနေမယ်..လေ့လာရင် အရာရာ သိလာရတာပါပဲ..။ဘာကြောင့်လို့ထင်ပါသလဲ သူငယ်ချင်း.....။
တစ်ခါတစ်လေ ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ မထင်မှတ်တဲ့ နေရာတွေက အစပြုတတ်ပါတယ်..။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီးခဲ့ရတဲ့ လူတွေ အများကြီးပါ..။
သူတို့ဟာ အဓိကအားဖြင့် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ..။
“ အလွန်ဒေါသထွက် ၊ ရန်ဖြစ်နေချိန်ကလွဲလို့ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်
သေဆုံးသူအများစုဟာ အိမ်သာက အထွက်မှာ မူးပြီးလဲကျ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်တယ်. .
လို့တွေ့ရမှာပါ.။ ဒီလိုပါပဲ...သောမတ်စ်ဗီးလ် လဲတွေ့ရှိခဲ့တယ်..။ ”
သူ့အဖိုးကလဲ အိမ်သာက အထွက်မှာလဲကျ သေဆုံးသွားခဲ့တာလေ..။
သူ သေသေချာချာ လေ့လာတော့ ရိုးရိုးအိမ်သာခွက်(ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ခွက်)မှာ ထိုင်ပြီး
အိမ်သာတတ်သူဟာ ဒူးက ၁၅၀ ဒီဂရီကျော် ကွေးပြီး ထိုင်ရုံသာမက လူဝိတ်ကပါ ဖိမိထားတော့ ခန္ဓာကိုယ်က သွေးကြောတွေ ပိတ်မိနေတယ်..။
ဒီအချိန်မှာ အိမ်သာတတ်ပြီးလို့ ရုတ်တရက်ထလိုက်တော့ ကွေးနေတဲ့ ဒူးဟာ..ရုတ်တရက်သွေးကြောကို ဖွင့်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်သွေးကြောကိုဆောင့်တိုး စေတယ်..။
လူငယ်တွေမှာ ခံနိုင်ရည်ရှိပေမဲ့ လူကြီးတွေကျတော့ ခံနိုင်ရည်အားကျနေပြီလေ.။
ဒါကြောင့် အိမ်သာက အထွက်မှာ လူတွေ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်တာလို့... သူတင်ပြတယ်..။
ဒါနဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိမှု နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ်နဲ့ ရိုးရိုး အိမ်သာခွက်တွေ အစား
ထိုင်ကမုတ်ခွက် တွေကို ပြောင်းသုံးဖို့ သူတီထွင်ခဲ့တယ်..။
ထိုင်ကမုတ်ခွက် တွေ အပြောင်းအလဲရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကလဲ အံ့သြစရာကောင်းပါတယ်..။
၇၀ % သော လူတွေ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်..။
ပြင်သစ် ၊ ဆွီဒင် ၊ ဂျာမနီ ၊ အမေရိကန် ၊ဟော်လန် နိုင်ငံတွေမှာ ထိုင်ကမုတ်ခွက် သုံးပြီးကတည်းက ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်သူ ၈၅ % လျော့ချနိုင်ခဲ့တယ်..။
အင်္ဂလန်အပါအ၀င် တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ၇၀ % လျော့ချနိုင်ခဲ့တယ်..။
ဖွံဖြိုးပြီး အာရှနိုင်ငံများမှာ ၆၀ % ကျော်လျော့ချနိုင်ခဲ့တယ်.. ။
အာဖရိကတိုက်မှာတော့ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်သူ တဖုတ်ဖုတ်ပါပဲ..။
Credit:Mr-Daung Char Sai
သူငယ်ချင်း .. . ကားမောင်းတာတော့ သတိထား… (၂)
အေး သူငယ်ချင်း… ငါလည်း ရေးရင်း ငိုက်သွားလို့ လမ်းဘေး ခဏ ထိုးရပ်ပြီး ၂ ခွက်လောက် ချလိုက်ရတယ်… ဘီယာ မဟုတ်ဘူး ကော်ဖီ ပြောတာ.. ကဲ ပြန်ဆက်ရရင်…
လူ အိပ်ငိုက်တဲ့ ကိစ္စတော့ အပေါ်မှာ လမ်း အကြောင်းပြောရင်း နဲ့ ထည့်ပြောခဲ့သလို အဲဒါ လူတွေရဲ့ အပြစ်လုံးလုံးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ။ အိပ်ငိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုတွေ နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်း ရှိတယ်ကွ။ မြန်မာတွေဘဲ စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ဂရုမစိုက် လို့ ငိုက်တယ် လို့တော့ ပြောမရဘူးပေါ့ကွာ။ လူဆိုတာကတော့ လူအတိုင်းအတာ ထိ ပင်ပန်းလာရင် ငိုက်မယ်၊ အိပ်ချင်မယ် ဆိုတာတော့ ရှိမှာဘဲလေ။
ရှေ့ပိုင်းမှာ ပြောခဲ့သလို မမောင်းခင် ညမှာ အိပ်ရေးမပျက်အောင်၊ ညကထဲက အရက် ဘီယာ ရှောင်သင့်တာ၊ ၂နာရီ လောက် မောင်းပြီး ၁၀ မိနစ်လောက် ခဏတဖြုတ် နားနားပေးရတာတို့၊ fresh air ရှု ရတာတို့၊ ည ၁၂ နာရီ နဲ့ မနက် ၄ နာရီ ကြား တတ်နိုင်ရင် မမောင်းဖို့၊ caffeine များများ ပါတဲ့ ကော်ဖီ တို့ ဘာတို့ သောက်တာ တွေ၊ လုံးလုံး မရရင် ဆက်မမောင်းဘဲ လုံခြုံစိတ်ချ တဲ့ နေရာမှာ အိပ်ပြစ်လိုက်ဖို့တွေ စတာတွေကို သူ့ဘာသာ ဂရုစိုက်တတ်အောင် သတိပေးရင်း educate လုပ်တာမျိုး၊ လမ်း design မှာ curvilinear အနေနဲ့ ဖောက်တာတို့၊ frequent interval မှာ နားလို့ရအောင် စီစဉ်ပေးတာတို့လဲ လုပ်ပေးလို့ ရတယ်ကွ။
အတိုဆုံး သတိပေးတာလေးကတော့ Tiredness Can Kill - TakeaBreak တဲ့။
နောက်တခု ကားလိုင်စင်။ ငါတို့ဆီမှာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးတဲ့ ပုံစံ ငါတော့ ကြိုက်သကွ.. မင်း သိပါတယ် ငါ့ လိုင်စင်ဆို ကားတောင် မမောင်းတတ်သေးဘူး အိမ်လာပို့ ပေးသွားတာဘဲလေ.. ဟဲ ဟဲ။ ဒီဘက်မှာတော့ မရဘူး မောင်။ Theory test ရယ် practical test ရယ် ဆိုပြီး အမှန်အကန် ဖြေရတယ်။ Theory test မှာ ၂ ပိုင်း ရှိတယ်။ multiple choice ရယ် နောက်တခုက ကွန်ပျူတာ ပေါ်မှာ Game ဆော့သလို ကိုယ်က driver အနေအထားနဲ့ ဘေးက ဖျတ်ကနဲ ဝင်လာတဲ့ အန္တရာယ်ကို ဘယ်လောက် မြန်မြန်မှန်မှန် response လုပ်နိုင်သလဲ စစ်တဲ့ hazard perception test ၂ခု ဖြေရတယ်။
Multiple choice အတွက် ဖတ်ရတဲ့ စာအုပ် က ဝတ္တု စာအုပ်ဆိုဒ် ကို စာမျက်နှာ ၃၀၀ လောက် ထူတယ်ဟေ့။ တခုချင်း သေချာမှတ်ရတာဆိုတော့ တရက် ၁ နာရီလောက် ဖတ်သွားရင် ၂ ပတ် ၃ပတ် တော့ ကောင်းကောင်း ဖတ်ယူရတယ်ကွ။ အောက်မှာ ပြောထားတဲ့ အခန်း တွေ နဲ့ ကားမောင်းမဲ့ သူတွေ သိသင့်သိထိုက်တာတွေ ဖတ်ခိုင်း မှတ်ခိုင်းတယ်ကွ။ central server ကို လှမ်းချိတ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ random မေးခွန်း ၅၀ မေးပြီး ၄၃ ခု မှန်မှ အောင်တယ်။ စစ်တဲ့သူ ဆိုတာက ကွန်ပျူတာ ဖွင့်ပေးတာနဲ့ result print out လုပ်ပေးတာလောက်ဘဲ လုပ်လို့ရတာကွ၊ ငါတို့ ဖြေတာတွေက မိန်းဆာဗာကို တခါထဲ ဝင်သွားတာ။ အဲဒါကြောင့် သူ့ကို အာရကေ သွားပေးလဲ အလကားဘဲ…
Theory test စာအုပ်မှာ ဖတ်ခိုင်းတဲ့ အခန်းတွေက
Other types of vehicle,
Road and traffic signs,
Safety and your vehicle,
မင်း ခေါင်းစဉ်တွေ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ကို ခန့်မှန်းကြည့်လို့ ရလောက်မယ် ထင်တယ်။ အဲဒီ ထဲက Alertness, Attitude, Safety and your vehicle, Safety margins, Hazard awareness, Vulnerable road users, Other types of vehicle ဆိုတဲ့ ၇ခန်း လောက်မှာ က ကိုယ့်ရဲ့ safety၊ သူများရဲ့ safety ကို အဓိက ထားပြီး သိအောင် လုပ်ခိုင်းထားတယ်။ ကျန်တဲ့ အခန်းတွေမှာ road sign တွေ regulations တွေ သိသွားအောင် ထည့်ထားတယ်။ ကိုယ့် ကားရှေ့က လူတယောက် ဖြတ်ကူးလို့ $@#^& သေချင်နေလား လို့ မဆဲရဘူး တခြား လမ်း အသုံးပြုတဲ့သူတွေ ကို အလေး(respect) ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ အသိကို ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဒို့ဆီက လူတွေကတော့ မရဘူးကွ များများသာ ဆဲပေး .... :D
အဲဒီ test မှာ ကားမောင်းမဲ့ သူကို အဓိက ရိုက်သွင်းလိုက်တာက ကားမောင်းတာ ကိုယ်တိုင်တင် မက ကိုယ်ကြောင့် တခြားသူတွေပါ အန္တရာယ် ရှိတယ်။ အန္တရာယ် မဖြစ်အောင် ဘာတွေ ဆောင်ရမယ် ဘာတွေ ရှောင်ရမယ် ဆိုတာ ခေါင်းထဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကွ။ practical test မှာတော့ အဓိက က ကားကို ဘယ်လောက် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကိုင်တွယ်တတ်သလဲ နဲ့ လမ်း ပေါ်မှာ အန္တရာယ် မရှိအောင် မောင်းတတ်ပြီလား ဆိုတာ စစ်တာဘဲ။
ဒါက ရိုးရိုး ငါတို့ ကိုယ့်ကား ကိုယ် မောင်းမဲ့သူတွေ အတွက်ပေါ့။ taxi တို့၊ express လို ကားကြီးတွေ အတွက်ဆို ထပ်ပြီး ပိုကြပ်တဲ့ test တွေ နဲ့ စစ်သေးတယ်ဟေ့။ အဲဒါကတော့ အများပြည်သူတွေ ပါလာပြီလေ။ လူတွေ အများကြီး ရဲ့ အသက် သူ့လက်ထဲ အပ်ထားရတာဆိုတော့ ရိုးရိုးဒရိုင်ဘာတွေ ထက်ကို professional ကျကျသိထားဖို့ လိုလာတာပေါ့။
”Driving Licence” or “Licence to kill”
မကျွမ်းကျင်လို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အသိ မသိလို့ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သိရဲ့သားနဲ့ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လုပ်လို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တခုခု ဖြစ်ရင် သူ့ အသက်အန္တရာယ်တင် မက တခြားသူတွေရဲ့ အသက်အန္တရယ်ပါ ထိခိုက်တယ်လေ။ အဲဒီတော့ public ကို တာဝန်ရှိသူတွေက အကာအကွယ် ပေးဖို့ လိုင်စင်ပေးကထဲက တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ်တာ မှန်တယ် သူငယ်ချင်း။ နို့် မဟုတ်ရင် driving licence က နေ licence to kill ဖြစ်သွားမယ်။
အဲ စည်းကမ်း မလိုက်နာ ရင်လည်း တွယ်တာ အထူး။ ငါတော့ မလိုက်နာချင်လို့ မဟုတ်ဘဲ မသိလိုက်လို့ သတိမထား မိလိုက်လို့ ပေးလိုက်ရတဲ့ penalty ကြေးကတော့ မနည်းဘူးဟေ့။ ပေးလိုက် ရတော့ နောက် မမေ့တော့ဘူး ပေါ့ကွာ ဟားဟား...။ ဘော်ဒါ တယောက်တော့ မိုင် ၃၀ လမ်းမှာ ၃၇ နဲ့ မောင်းလို့ ၃ပွိုင့် နဲ့ penalty ဆောင်မလား၊ သင်တန်း တက်မလား ဆိုပြီး ရွေးခိုင်းလို့ သင်တန်းသွားတက်ပြီး lecture အရိုက်ခံရတယ်ကွ။
ပွိုင့်တွေ ထိလိုက်ရင် ဒီမှာ ပေးရတဲ့ ကားအာမခံကြေးတွေ ဘာတွေကအစ အကုန် မြင့်ကုန်တာလေ။ နောက်ပိုင်း ပွိုင့်တွေ များသွားရင် လိုင်စင် ပြန်ဖြေရတာတို့၊ နှစ် အပိုင်းအခြား ဒါမှမဟုတ် လုံးဝ အပိတ်ခံရတာတို့ လုပ်သကွ။ အင်း တခါတလေ ကျတော့လည်း လူတိုင်း သည်းခြေကြိုက်တဲ့ ငွေ... အကုန်မခံချင်တာနဲ့ ဖမ်းထိမ်း လိုက်တာ တော်တော်တော့ ထိရောက်တယ်ကွ...။ ဒို့ဆီလည်း ဒါမျိုးတွေ လုပ်ရင်ကောင်းမယ်။ သြော် ဒါနဲ့ ညဘက် ပြိုင်မောင်းနေတဲ့ ပြိုင်ကားတွေ ဖမ်းဖို့ ရဲတွေကိုတောင် ကားအကောင်းစားတွေ ပေးထားပြီ ဆိုလား… ကောင်းပါတယ်… ကောင်းပါတယ်.. ဟဲဟဲဟဲ…
အော်အေး.. သတိရလို့.. ခါးပါတ် ပတ်တာ။ ဒီမှာတော့ ဒရိုင်ဘာ နဲ့ ရှေ့ passenger seat မှာထိုင်တဲ့သူက ခါးပတ် ပတ်ကို ပတ်ရတယ်။ မပတ်ထားတာ မြင်ရင် လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ရဲ က လာပြောတော့တာကွ။ ဒီမှာက ရဲက ဒို့ဆီလို ဘဲဥ က ဘဲဥ သပ်သပ်၊ စခန်းက ရဲ ကသပ် သပ် ဆိုတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ Highway/ Motorway က ရဲကတော့ သတ်သတ်ရှိတယ်။ သူတို့က ဖမ်းဖို့တင် လုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊ accident တခုခု ဖြစ်သွားရင် ဖြစ်တဲ့သူတွေကို အမြန်ဆုံး ကယ်နိုင်အောင်၊ လမ်းပိတ်တာတွေ အခြေအနေ ပိုဆိုးမလာအောင် ဝင်ထိန်းတာ။ camera တွေ တပ်ထားတာဆိုတော့ over-speed လိုက်ဖမ်းတာမျိုးတော့ လုပ်လေ့မရှိဘူးကွ။
ဆိုတော့ကွာ… ကားသမားတွေ မဆင်မခြင် မောင်းလို့ ဖြစ်ရတာ ဆိုတဲ့ ပြသနာကို public safety အတွက် မဆင်မခြင် မမောင်းသင့်ကြောင်း ဘယ်လို ပညာပေးသလဲ၊ မမောင်းနိုင်အောင် ဘယ်လို တင်းကျပ်ထားသလဲ ဆိုတာတွေ စဉ်းစားဖို့ လိုမယ်ကွ။
လူတွေကို အဲဒီလို ပညာပေး၊ ဒဏ်ပေး နဲ့ စည်းကမ်း လိုက်နာအောင် လုပ်သလို ကားတွေရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု ကိုလည်း ပုံမှန် စစ်ရသကွ။ ဒီမှာတော့ MOT test လို့ ခေါ်တယ်။ ကညန လို့ ရုံးချုပ်ထိ သွားစရာ မလိုဘူး register လုပ်ထားတဲ့ ဝပ်ရှော့တိုင်းမှာ စစ်လို့ ရတယ်ကွ။ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ယူထားတဲ့ certified technican က စစ်ရတယ်။ ဘာတွေ စစ်သလဲ ဆိုတော့ Steering, Lights – function indicator, Brakes, Tyres, အောက်ပိုင်း စတာတွေ အစုံဘဲ ကွ။ ဒီမှာ သူတို့ စစ်တဲ့ ပုံစံလေး ရှိတယ်http://www.dft.gov.uk/vosa/repository/MOT%20Inspection%20Checklist%20%28VT%2040%29.pdf
မင်းကတော့ ကားဆို အမြဲ ဂရုစိုက်နေတတ်တဲ့သူ ဆိုတော့ အဲဒီ ပုံစံထဲက စစ်ရမဲ့ဟာတွေကို အမြဲ စစ်နေမဲ့သူ ဆိုတာ ငါသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒို့ဆီက ဝပ်ရှော့ဆရာတွေက ကျောင်းတွေ သင်တန်းတွေနဲ့ စနစ်တကျ သင်ခဲ့ရတဲ့သူ မရှိသလို၊ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ထုတ်ပေးထားတာမျိုး လဲ မရှိတော့ knowledge ပိုင်း အားနည်းတာလေးတွေ ရှိတယ်ကွ။ ဝပ်ရှော့ဆရာမသိလဲ ငါ ဒါတွေ ကောင်းအောင် စစ်မယ် ဆိုပြီး ကိုယ့်ကား ကြံ့ခိုင်မှု ရှိအောင် ကိုယ်ဘာသာ လုပ်ထားပေါ့ကွာ။ နားမလည်တဲ့ သူတွေကိုလည်း ဒါလေးတွေတော့ ကောင်းအောင် ကြံ့ခိုင်အောင် လုပ်ထားဆိုပြီးတော့လည်း မင်း အကြံပေးမယ် ဆိုရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာ။
MOT မှာ ဘာတွေ စစ်လဲ ကြည့်ရင် စစ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က လမ်းပေါ်မှာ မောင်းသွားရင် ကား ချို့ယွင်းမှု မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် ကားရဲ့ structure နဲ့ ပတ်သက်တာ၊ ဘရိတ်တွေ၊ တာယာတွေ၊ တဖက်လူ ကို အချက်ပြမဲ့ အချက်ပြမီးတွေ ကို အဓိက စစ်တာ ဆိုတာ မင်း တွေ့လိမ့်မယ်။ အလုံးချိန်းလား၊ အရောင်ပြောင်းလား၊ နံပါတ်ပြား ထပ်နေလား ဆိုတာတွေ မဟုတ်ဘူးကွနော်။ အဲဒါတွေကတော့ လမ်းကြောင်းနဲ့ သွားပေါ့ကွာ… ဟားဟား။
အဲဒီ MOT က ငါတို့ လို အိမ်စီးကားတွေ ကတော့ ၁နှစ်တခါ စစ်ရပေမဲ့ taxi လို passenger တင်တဲ့ ကားမျိုးတွေဆို ၆ လ တခါ ကို စစ်ရတာကွ။ ဒီလို ယာဉ်ကြံ့ခိုင်မှု ကို စစ်တာကတော့ UK ပုံစံပေါ့ကွာ။ တခြား နိုင်ငံတွေမှာလည်း သူ့ အစီအစဉ်နဲ့သူ လုပ်ကြတယ် လို့ ကြားဖူးတယ်ကွ။ ယာဉ်ကြံ့ခိုင်မှု ဆိုတာ ကားသမား နဲ့ ကားပိုင်ရှင် ပေါ်မှာ တာဝန်ရှိသလို မကြံ့ခိုင်တဲ့ ကား လမ်းပေါ် တက်လာလို့ အများပြည်သူ ကို ထိခိုက်မှု မရှိရလေအောင်လည်း စီစဉ်သင့်တယ်လို့ ငါတော့ မြင်တယ်။
သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အသိ မရှိလို့ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ မောင်းတတ်လို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလို ဒရိုင်ဘာတယောက်က၊ မကြံ့ခိုင်တဲ့ကား တစီး ကို မောင်းပြီး၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ လမ်းမပေါ်တက်လာရင် အရူးလက်ထဲ ကျည်အပြည့်ပါတဲ့ machine gun ထည့်ပေးပြီး လူတွေကြားထဲ လွှတ်လိုက်သလို public အတွက် အန္တရယ် များတယ်လို့ ငါတော့ မြင်တယ်ကွ။
အဲဒီတော့ ကွာ ကားမောင်းရင် ကိုယ်တိုင် လိုက်နာရမဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ လိုက်နာသင့်သလို ဘေးဘီဝဲယာ လည်း မပြတ်ကြည့်ဖို့တော့ လိုမယ်ကွ။ ကိုယ်တိုင် မငိုက်လည်း ငိုက်တဲ့သူ လာတိုက် နိုင်ခြေ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကား ကောင်းနေလည်း မကြံ့ခိုင်တဲ့ကား က ကိုယ့် ဝင်တိုက်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ရှိတယ်။ ကိုယ်က ဖြည်းဖြည်းမောင်းလဲ တခြားကား က အကွေ့မှာ အရှိန်လွန်ပြီး ကိုယ့် ဝင်တိုက်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ရှိတယ်။
သူငယ်ချင်း… ကားမောင်းတာတော့ သတိ ထားကွာ။
ပျောက်ဆုံးသွားသော လက်ထပ်လက်စွပ်ကို ၁၆ နှစ်ကြာပြီးမ...
ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ၏ မှားတာရှိရင်တောင်းပန်သည်ဆိ...
ပြန်ခါနီးတွင် ငိုယိုပြီး ပြောဆိုသွားသော ကင်တားနား၏...
ကင်တားနား မိတ္ထီလာက ဘာဖြစ်လို့ ကြောက်ချီးပန်း ထွက်ေ...
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာမိန်းကလေးအား မွတ်ဆလင် မုဒိမ်းကျင့်သ...
စူပါ ဖလားတွင် အက်သလက်တီကိုနှင့် သရေသာ ကစားနိုင်ခဲ့...
ဖောက်ထွင်းရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ ဗွီဒီယို ကင်မရာ (That C...
စင်္ကာပူမှ ကျောင်းသူတစ်ဦး သူမ၀တ်ပြီးသား အတွင်းခံမျာ...
တချို့Myanmar GSM Phone တွေ Message ပို့လို့မရဘူး ...
ရခိုင်ပဋိပက္ခများအပြီး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် မလာရောက်၍ ...
"လူကြီးတွေ ဘာကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ် သေဆုံးကြ...
သူငယ်ချင်း ... ကားမောင်းတာတော့ သတိထား… (၁)
ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ခုနစ်ပါးတွင် တစ်ပါး ပါဝင်သည့် ဘောရောဗ...
စမတ်ဖုန်း သုံးစွဲမှုသည် အဝေး မှုန်ခြင်းကို ဖြစ်ပွား ...
လူထုကို လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့် ပြုသည့်အတွက်ြ...
တညင်းသီး အဆိပ်သင့်ခြင်း (တညင်းတောက်ခြင်း) အတွက် သိ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ တိုးတက်လာေ...